မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ သံဃာ့တပ်ပေါင်းစုအဖွဲ့ကြီး ( A.B.M.A ): October 2008
ငွေဆောင်တွင် ထူးကုမ္ပဏီမှ လေဆိပ်ဆောက်မည်
ဒေါ်စု လွတ်လာမည်အထင်ဖြင့် ပါတီလူငယ်များ ရုံးချုပ်ကိ...
ကရင်စခန်းတခုကို စစ်အစိုးရ ပူးပေါင်းတပ်က သိမ်းပိုက်...
၈၈ ခေါင်းဆောင်များကို မအူပင်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့
ကေအန်ယူ တပ်မဟာ(၆) နယ်မြေမှာ ဒီကေဘီအေနှင့် တိုက်ပွဲ...
၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် (၉)ဦးကို ထောင် (၆)လစီ ပြ...
၂၅ နှစ်အတွင်း မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ ပထမဆုံ...
လွယ်ဟိန်းကုမ္ပဏီ စက်မှု(၁)၀န်ကြီးဌာနကို ကျပ်သန်း ၆၀...
ထိုင်းဘဏ်များရှိ စုဆောင်းငွေအားလုံး ၂၀၁၁ ခုထိ ခိုင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လာမည့်လတွင် ဆရာဝန်နှင့် တွေ့...
ဗုံးကြောင့် သေဆုံးသူမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအ...
အာဏာရှင်မှောင်ရိပ်၌ မြန်မာအမျိုးသမီးများ ကျားမခြွဲ...
နိုင်ငံရေးသမားကြီးအချို့  ဟောင်ကောင်သွားမည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အနီးမှ လုံခြုံရေးများ လှေ...
မြန်မာယူနီဗာဆယ်ဘဏ်မှ ငွေလာမထုတ်ပါက နိုင်ငံ့ဘဏ္ဍာအဖြစ...
နေပြည်တော်လွှတ်တော်ရုံးအဖွဲ့ ၂၀၀၉ မှာ စတင်ရုံးထိုင်...
GTI မှGTC သို့ပြောင်းလဲခြင်းအခမ်းအနား
မြန်မာနိုင်ငံ နှင့် နတ်ကိုးကွယ်မှု
နိုင်ငံတကာ အခြေအနေ-- ( အမေရိကန်)
နာဂစ် မုန်တိုင်းအပြီး Logistic ဘာသာရပ်ဖြင့် အသက်ေ...
ဓာတ်ဆီ ဖြည့်စဉ် မော်တော်ယာဉ် တစ်စီး မီးလောင်
ဗုဒ္ဓ စာပေကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် အခမဲ့ လေ့လာ သင်ယူနု...
ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ ငါးနှစ် အတွင်း ပြန်ကောင်း...
အော်စကာဆုရှင် ဂျက်နီဖာ ဟဒ်ဆန်၏ မိခင် နှင့် အစ်ကို ...
‘ကေ’ သင်္ဘောလိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်များ ရပ်ဆိုင...
မြန်မာပြည်အရှေ့ပိုင်းတွင် အရပ်သား ၆၆ဝဝဝ အိုးအိမ်မျ...
ဆရာတော်ဦးစာရိန္ဒ၊ စာတစောင်နှင့် လပြည့်နေ့ည ဘုရားပွ...
တိုးတက်မှု၏ သော့ချက်သည် ဒေါ်စုအား လွှတ်ပေးခြင်းပင်ဟု ...
ရွှေဝါရောင် သံဃာတော်တပါး ထိုင်းနယ်စပ်သို့ တိမ်းရှော...
စစ်အစိုးရတပ်များကြောင့် ကျောင်းများ ပိတ်ထားရ
သြစတြေးလျနိုင်ငံက မြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်များကို တိုး...
Flower သတင်းထောက်ချုပ် ကိုစောမြင့်သန်း ပြန်လွတ်မြေ...
လူရွှင်တော်ဇာဂနာကို ကနေဒါကလောင်ရှင်များအဖွဲ့မှ ဆုချ...
ရန်ကုန်မှာ ယာဉ်ထိန်းရဲမဟုတ်သူများက ကားများကို ဖမ်း...
ကေအန်ယူ၏ ပထမဆုံး အမျိုးသမီးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ် နော်စ...
ရန်ကုန်မှာ စနေ တနင်္ဂနွေ ဗုံး (၂) လုံးပေါက်ကွဲ၊ လူ (...
ပြီးဆုံးလေပြီ ရုဒ်မတ်၊ နိဂုံးချုပ်လေပြီ ကသန်း
တရုတ်တွင် သတင်း လွတ်လပ်ခွင့် တိုးမြှင့် ခွင့်ပြု
ISO ၏ အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာသော တရုတ် နိုင်ငံ
နိုင်ငံ (၇) နိုင်ငံအား ဗီဇာ မလိုဘဲ၊ US သို့ဝင် ခွင...
Dear Friends of Burma in the DC Area,
ကိုမင်းကိုနိုင်ရဲ့ (၄၅) နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ အမှတ်တရ
၁၄ ကြိမ်မြောက် ကေအန်ယူ ကွန်ဂရက် ကျင်းပပြီးစီး (ဗို...
မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လာသော ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသွား...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ၁၃ နှစ်ကြာ ထိန်းသိမ်းခံရမှု ဆန်...
ထိုင်းနဲ့ ကမ္ဘောဒီးယား ပဋိပက္ခ သံတမန်ရေးအရ ကြိုးစားအ...
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး မျှော်မှန်းသလို အောင်မြင်နိုင်ဖိ...
သီတင်းကျွတ်လပြည့် ရွှေတ်ိဂုံမှာ ဘုရားဖူး ၂သိန်းကျော...
နာဂစ်မုန်တိုင်းဒဏ်ခံ ပြည်သူများအပေါ် အစားအစာ ပုံမှန...
မြန်မာနိုင်ငံအတွက် လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်မည်ဟု ဗြိတိန်...
ထိုင်းတပ်တွေ ၂၄ နာရီအတွင်း ရုပ်သိမ်းပေးဖို့ ကမ္ဘောဒ...
ထိုင်းနှင့် စင်ကာပူတို့က မြန်မာနိုင်ငံတွင် နောက်ထပ...
မြေငလျင်လှုပ်မှုများ ဆက်တိုက်ဖြစ်နေသဖြင့် ဒေသခံများစ...
စစ်တွေ ဆွမ်းဆန်လောင်းပွဲ သံဃာတော်အရေအတွက် ကန့်သတ်ခ...
အတိုက်အခံ လူငယ် ၈ ဦးကို ဖမ်းဆီး
ဗန်းမော်က ကလေးငယ် နှစ်ဦး မီးလောင် သေဆုံး
စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ဖယ်ရှားရေး အတူတကွ လုပ်ဆောင်ဖိ...
မိထ္ထီလာတွင် မီတာများစစ်ဆေးပြီး အဆမတန် ဒဏ်ရိုက်ခြင်...
စစ်တပ်နှင့်ရဲကို အားကိုးပြီး အနိုင်ကျင့် ခြိမ်းခြေ...
အခွန်မဲ့ပစ္စည်းတင် ကား ၉ စီး တရုတ်နယ်စပ်မှာ အဖမ်းခံ...
ထိုင်းအစိုးရဖြုတ်ချရေး အုံကြွမှု အထွေထွေသပိတ်သို့ ဥ...
ထူးကုမ္ပဏီက ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ငွေဆောင်ကမ်းခြေအနီးမှ သဇင်ကျေးရွာတွင် လေယာဉ်ကွင်းတခု မကြာမီ တည်ဆောက်သွားဖွယ် ရှိသည်။
ယခင် လေယာဉ်ကွင်း ဆောက်ရန် လျာထားသည့် နေရာမှ တမိုင်ခန့်အကွာတွင် တည်ဆောက်မည့် လေယာဉ်ကွင်းသစ်အတွက် တိုင်းတာရေးလုပ်ငန်းများ စတင်လုပ်ဆောင်နေပြီ ဖြစ်ကာ လာမည့် ၃ နှစ်အတွင်း အပြီးသတ် ဆောက်လုပ်သွားမည် ဖြစ်သည်။
လေဆိပ်အသစ်သည် ရန်ကုန်-ဘန်ကောက်အပြင် နိုင်ငံတကာ လေကြောင်းများမှ ကိုယ်ပိုင်လေယာဉ်များဖြင့် တိုက်ရိုက် ပျံသန်းနိုင်မည့် အလတ်စားလေယာဉ်များ ဆင်းသက် ရပ်နားနိုင်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ဆောက်လုပ်သွားမည်ဟု ကုမ္ပဏီမှ တည်ဆောက်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ အရာရှိတဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ငွေဆောင်ကမ်းခြေသို့ လာရောက်မည့် ခရီးသွားများ ယခင်ကထက် ပိုမိုတိုးတက် ရောက်ရှိစေရန် ရည်ရွယ်သည်ဟု သူက ဆိုသည်။
စစ်အစိုးရအကြီးအကဲ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူ ဦးတေဇ၏ ထူးကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတကာ၊ ပြည်တွင်း အဲပုဂံလေကြောင်းလိုင်းနှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများကို ပိုင်ဆိုင်သည်။
ပုသိမ်မြို့မှ ၂၉ မိုင်အကွာတွင် တည်ရှိသည့် ငွေဆောင်ကမ်းခြေတွင် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဟိုတယ် ၅ လုံးထက်မနဲ ရှိကာ နာမည်ကျော် ချောင်းသာကမ်းခြေထက် ပိုမိုလှပသော်လည်း ပိုးမွှားတိရစ္ဆာန် အန္တရာယ်များ ရှိသည့်အပြင် ရေအတိမ်အနက် မမှန်မှုကြောင့် ပြည်တွင်း ခရီးသွားဧည့်သည်များ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်း ပိုမို နည်းပါးသည်။
ယခုနှစ် မေလဆန်းတွင် တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ် မုန်တိုင်းဒဏ်မှ လွတ်ကင်းခဲ့သည့် ငွေဆောင်သည် ယခင် သဘာဝ အလှအပများ မပျက်မယွင်း ရှိနေသေးသည်။
သို့သော်လည်း နာဂစ်အလွန် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အခြေအနေသည် ဆိုးရွားစွာ ကျဆင်းသွားသည့်အပြင် ပွင့်လင်းရာသီ (စက်တင်ဘာမှ မတ်လလယ်အထိ) တွင် နိုင်ငံတကာ ခရီးသွား ဧည့်သည်များသည် ခရီးစဉ်အတွက် ကြိုတင်စာရင်းပေးသွင်းခြင်း - Booking မရှိသလောက် နည်းပါးနေခဲ့သည်။
ရန်ကုန်ရှိ အပတ်စဉ်ထုတ် သတင်းဂျာနယ် Flower News Journal တွင် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ၀န်ကြီးဌာနမှ မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးသွားလုပ်ငန်း မြှင့်တင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာ စာနယ်ဇင်းသမား ၅ ဦးအား တတိယ အကြိမ်မြောက်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဖိတ်ခေါ်ကာ ခရီးသွားဒေသများ ဖြစ်သည့် ပုဂံ၊ မန္တလေးနှင့် အင်းလေးဒေသများသို့ သွားရောက်စေခြင်းဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံသည် လည်ပတ်ရန် သင့်တော်ကြောင်း လေဆိပ်အသစ် တည်ဆောက်ပြီးစီးပါက ဒေသခံများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေနိုင်သည်ဟု ထူးကုမ္ပဏီ အရာရှိက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စတင်ခဲ့သော အမေရိကန်အစိုးရ၏ မြန်မာစစ်အစိုးရနှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းစီးပွားရှာစားနေသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များကို ပိတ်ဆို့ဒဏ်ခတ်မှု ပြုလုပ်ရာတွင် ကုမ္ပဏီသူဌေး ဦးတေဇလည်း ပါဝင်သည်။
Posted by Sanghaalliance at 8:48 PM0comments
ဒေါ်စု လွတ်လာမည်အထင်ဖြင့် ပါတီလူငယ်များ ရုံးချုပ်ကို သွားကြ
အထိန်းသိမ်းခံ ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်လာမည် အထင်ဖြင့် NLD လူငယ် ၃၀ နီးပါးက ယနေ့တွင် ရန်ကုန်ရှိ NLD ဗဟိုရုံးချုပ်သို့ သွားရောက်ခဲ့ကြသည်။
ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာနိုင်သည်ဟု အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် - NLD ပါတီဝင်များအကြား အပြန်အလှန် တယ်လီဖုန်း သတင်းစကားများ ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက် ဗဟန်းမြို့နယ် ရွှေဂုံတိုင်လမ်းရှိ ပါတီရုံးချုပ်သို့ ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်အချို့မှ ပါတီဝင်လူငယ်များသည် ယခုလို သွားရောက်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။
"ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း မြို့နယ်တွေဆီက ပါတီအဖွဲ့ဝင် လူငယ် ၃၀ နီးပါး ရုံးကို လာမေးကြတယ်။ ရုံးက ပြောလိုက်တာကတော့ အဲဒီကိစ္စက မဟုတ်ပါဘူးလို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြန်ဖြေခဲ့တယ်" ဟု ယနေ့တွင် ရုံးချုပ်သို့ ကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခဲ့သူ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှ NLD ရပ်ကျေးတာဝန်ခံက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အဖွဲ့ချုပ်ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဥာဏ်ဝင်းကလည်း "ကျနော်တို့ ဘာမှ မကြားသေးပါဘူး။ ပါတီဝင်တွေက မေးမြန်းတာတွေ ရှိပါတယ်" ဟု ပြောသည်။
သို့သော်လည်း သူက တစုံတရာ မှတ်ချက်ပေးခြင်း မရှိပါ။
ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသည့် ကမာရွတ်မြို့နယ် တက္ကသိုလ်လမ်း နေအိမ်ရှေ့တွင် သံဆူးကြိုးများကို အာဏာပိုင်များက ပြီးခဲ့သည့် တနင်္ဂနွေနေ့မှ စတင်ကာ ဖယ်ရှားခဲ့သည်။
အတားအဆီးများ ဖယ်ရှားပြီး နောက်ရက် တနင်္လာနေ့မှ စတင်ကာ ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာတော့မည် ဟူသော ကောလာဟလများမှာ ပါတီ ၀င်လူငယ်များ အကြားတွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
''လွတ်မယ်ဆိုတာက တနင်္လာနေ့ကတည်းက ထွက်နေတာဗျ။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို စတယ်တော့ မပြောနိုင်ဘူး။ ဒီနေ့ကျတော့ ဒီနေ့ပဲ လွတ်တော့မလိုလို ဖုန်းတွေ ပြောနေရင်းကနေ သွားလာကြတယ် ထင်တာပဲ'' ဟု တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှ NLD ရပ်ကျေးတာဝန်ခံက ပြောသည်။
Posted by Sanghaalliance at 8:46 PM0comments
ကရင်စခန်းတခုကို စစ်အစိုးရ ပူးပေါင်းတပ်က သိမ်းပိုက်
ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ တပ်စခန်းတခုကို ဒီကေဘီအေနှင့် စစ်အစိုးရ ပူးပေါင်းတပ်များက ယနေ့တွင် သိမ်းပိုက်လိုက်သည်။
ကေအန်ယူ၏ စစ်တပ်ဖြစ်သော တပ်မဟာ ၆၊ တပ်ရင်း ၂၀၁ လက်အောက်ခံ တပ်ခွဲ ၃ ၏ ခလယ်လောဆယ်ဒေသရှိ တပ်စခန်းအား စစ်အစိုးရတပ်နှင့် ကရင်အဖွဲ့ကွဲ တခုဖြစ်သည့် တိုးတက်သော ဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင် အမျိုးသား တပ်မတော် - DKBA ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များက တရက်ကြာ တိုက်ခိုက်ပြီး ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် သိမ်းပိုက်သွားခြင်း ဖြစ်သည်။
"မနေ့က သူတို့ (ပူးပေါင်းတပ်) ကြိုးစားတယ်ဗျာ။ လက်နက် အကူအညီတွေနဲ့ နအဖ က ပစ်ပေးတယ်။ KNLA (ကရင်တပ်) လူဦးရေ ၁၅၀ လောက်က ခလယ်လောဆယ် စခန်းကို ၀င်လာတယ်။ ဒီနေ့ မနက် ၁၁ နာရီလောက်က ၀င်လာတယ်။ ကျနော်တို့က အဲဒီစခန်းကနေ ထွက်ပေးလိုက်ပြီ" ဟု ကေအန်ယူတွဲဖက် အတွင်းရေးမှူး (၁) ပဒို စောလှငွေက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အချို့သော သတင်းများက ကေအန်ယူဘက်မှ ၂ ယောက်ကျဆုံးသည်ဟု ပြောဆိုသော်လည်း ဖဒိုစောလှငွေကတော့ မဟုတ်မှန်ကြောင်း ငြင်းဆန်လိုက်သည်။ လက်နက်အင်အားချင်း မမျှ၍ စခန်းကျသွားရခြင်း ဖြစ်သည်ဟု သူက ပြောသည်။
ခလယ်လောဆယ်ဒေသသည် ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မြို့ မဲဆောက်၏ တောင်ဘက် အုန်းဖျန်ကျေးရွာ တဖက်ကမ်း မလှမ်းကမ်းတွင် တည်ရှိသည်။
လက်ရှိတွင် စခန်းအတွင်း၌ DKBA တပ်သား ၁၅၀ ခန့်က ၀င်ရောက်စခန်းချထားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လဆန်းပိုင်းကလည်း စစ်အစိုးရနှင့် DKBA ပူးပေါင်းတပ်များက ကရင်ပြည်နယ် ကော့ကရိတ်မြို့နယ်ရှိ ဝေါလေခီးဒေသမှ ကရင်တပ်စခန်းတခုအား တိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ မကြာခင် ရက်ပိုင်းအတွင်း၌ ကေအန်ယူဘက် က ပြန်လည် သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့သည်။
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၉ ဦးအား ယနေ့ နံနက်တွင် အင်းစိန်ထောင်မှ မအူပင်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့လိုက်သည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်၊ ကိုကိုကြီး၊ ကိုလှမျိုးနောင်၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမြအေး၊ ကိုဥာဏ်လင်း၊ ကိုပြုံးချို (ခ) ကိုဌေးဝင်းအောင်၊ ကိုအောင်သူနှင့် ကိုအောင်နိုင်တို့ ယနေ့နံနက် ၇ နာရီခန့်က ဧရာဝတီတိုင်းရှိ မအူပင်ထောင်သို့ ပို့လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဒီမနက် ၇ နာရီကျော်ကျော်လောက်မှာ ထွက်သွားတယ်။ မအူပင်ထောင်ကို ပို့လိုက်တယ် ပြောတယ်။ မိသားစုတွေကလည်း မေးတော့ ထောင်တာဝန်ရှိသူက မအူပင်ကို စုံစမ်းပေးတယ်လေ။ သူတို့ကို အဲဒီထောင်ကို ထုတ်တာ သေချာသွားပြီပေါ့" ဟု ကိုအောင်နိုင်၏ မိသားစုဝင်တဦးက ပြောသည်။
သူက "သူတို့ကို ထောင်ဝတ်စုံ အပြာတွေနဲ့ လက်ထိပ်ရော ခတ်ထားတယ်။ ထောင်ကားနဲ့ တင်သွားတယ်။ အနောက်မှာလည်း ရဲကားတွေ ပါတယ်။ သူတို့ ထုတ်သွားတဲ့ ပုံစံက ထူးထူးဆန်းဆန်းပေါ့နော်။ စုံစမ်းကြည့်တော့ သူတို့ အုပ်စု ထုတ်သွားတယ်ဆိုတာ သိရတယ်လို့ ထောင်ထဲမှာ ရှိတဲ့ မျက်မြင်တွေက ပြောတယ်လေ" ဟု ဆက်ပြောသည်။
အင်းစိန် အကျဉ်းထောင်သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာတွင် အမည်မဖော်လိုသူ အရာရှိတဦးက မအူပင်ထောင်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း အတည်ပြုသော်လည်း အသေးစိတ်ကိုမူ ပြောဆိုရန် ငြင်းဆိုသည်။
ကိုကိုကြီး၏ ညီဖြစ်သူ ကိုအောင်အောင်ထွန်းက "ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းက ဒီမနက်ပဲ ဖုန်းဆက်ပြောတယ်။ သေချာပါတယ်။ ထောင်ပြောင်းလိုက်တာ။ ကျနော်တို့က ရုံးထုတ်တာကိုတောင် မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဘာဖြစ်မယ် ဆိုတာပဲ နားထောင်နေတော့တယ်" ဟု ပြောသည်။
ယခုလ ၂၉ ရက်နေ့က အင်းစိန်ထောင်တွင်းရှိ ရန်ကုန် မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် အမှုကြားနာနေစဉ် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ၉ ဦးက တရားစီရင်မှုအား လွတ်လပ်မှုမရှိကြောင်း ဝေဖန်ပြောဆိုသဖြင့် ရုံးတော်အား မထီမဲ့မြင်ပြုမှု - ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၂၂၈ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၆ လစီ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီး ၂ ရက်အကြာတွင် ထောင်ပြောင်းရွှေ့မှု ပေါ်ပေါက်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
မနက်ဖြန် ရုံးထုတ်ရက်တွင် မိသားစုဝင်များက အင်းစိန်ထောင်သို့ သွားရောက်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
ကိုမင်းကိုနိုင်၏ မိသားစုဝင်တဦးက ယခုလို ထောင်ပြောင်းခြင်းကြောင့် စိုးရိမ်တကြီး စောင့်ကြည့်နေရသည်ဟု ဆိုသည်။
အလားတူ ရွှေဝါရောင် လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သဖြင့် ဖမ်းဆီးအကျဉ်းကျခံနေရသူ အန်အယ်ဒီလူငယ် ကိုသော်ဇင်မင်း၊ ကိုဝေလွင်မျိုးနှင့် သံဃာတော် ဦးစန္ဒိမာ (ခေါ်) အပုလေး ဆိုသူတို့သည် အင်းစိန်ထောင်တွင်း၌ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြနေသည်ဟု သိရသည်။
ယခုလ ၂၇ ရက်နေ့က ကိုဝေလွင်မျိုး၏ မိခင်ဖြစ်သူမှ ထောင်ဝင်စာ ပို့သည်ကို လက်မခံကြောင်းနှင့် ထောင် အစားအစာများကိုလည်း စားသောက်ခြင်း မပြုကြောင်း မိသားစုနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
"ကိုဝေလွင်မျိုးရဲ့ မိခင်က ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္လာနေ့မှာ သွားတာ။ ထောင်ဝင်စာလည်း ပေးမတွေ့ဘူး။ ထောင်ပါဆယ်လည်း လက်မခံဘူး။ အစားအသောက် ပါဆယ် လက်မခံဘူး" ဟု သူက ပြောသည်။
သူတို့သည် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ရာဇ၀တ်အကျဉ်းသားမှ မတရား အတင်းအဓမ္မ ခိုင်းစေမှု၊ ရိုက်နှက်မှုများ မပြုလုပ်ရန်အတွက် ထောင်အာဏာပိုင်များထံ တောင်းဆိုထားသည်ဟု ဆိုသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ဝင်များအတွက် လိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးနေသော ရှေ့နေနှစ်ဦးကို တရားစီရင်ရေးကို အနှောက်အယှက် ပြုသည်ဆိုကာ မြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးက ယနေ့တွင် ထောင်ဒဏ် ၆ လ အပြစ်ပေးလိုက်သည်။
မောင်မျိုးအောင် (အမည်ပြောင်းထားသည်) ကို သူလွန်ခဲ့သော ၃ လကျော်က အိမ်မှ ထွက်ပြေးသွားအပြီး စစ်တပ်ထဲ ရောက်သွားသည်ကြား၍ မိသားစုက သွားခေါ်သောအခါ သူသည် ဤလေ့ကျင့်ရေး စခန်းတွင် စစ်သင်တန်း တက်နေသည်မှာ ၃ လသာ ရှိသေးသည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:58 AM0comments
ကေအန်ယူ တပ်မဟာ(၆) နယ်မြေမှာ ဒီကေဘီအေနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ် ကေအန်ယူ(၂၀၁)စခန်းကိုသိမ်းဖို့ကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်
ယနေ့ နံနက်(၅)နာရီက ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ၊ တပ်မဟာ(၆)နယ်မြေအတွင်း ရှိ တပ်ရင်း(၂၀၁)တပ်စခန်းအား DKBAနှင့် နအဖ ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာ ကြိုကြားပစ်ခတ်မှုများကြောင့် ဒေသတွင်းအခြေ အနေမှာတင်းမာ လျက်ရှိသည်။
(၂၀၁)တပ်စခန်းလက်အောက်ခံ တပ်ခွဲ(၃)အခြေစိုက်ရာ (ခလုန်းလောင်ချယ်)စခန်းသည် မဲဆောက် မြို့မှ တောင်ဘက် ကီလိုမီတာ (၁၄၀)အကွာ အုန်းဖန်မြို့နယ်တဖက်ကမ်း နယ်စပ်မျဉ်းမှ မြန်မာ ဘက်အခြမ်း (၅)ကီလိုမီတာ အကွာအဝေးတွင်ရှိသည်။ ထိုင်းဘက်ခြမ်းရွာမှာ မယ်ပလောခီးထိုင်းရွာ ဖြစ်သည်။
ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် တပ်ရင်း(၂၀၁)လက်အောက်ခံ တပ်ခွဲ(၃)မှ အရာခံဗိုလ် စောထိခုက
“ဒီမနက် ငါးနာရီမှာ DKBA တပ်ရင်း (၃၃၃)၊ (၉၀၇)၊ (၉၀၆)၊ နအဖတပ်တွေ ပူးပေါင်းပြီး ကျနော်တို့ တပ်ခွဲ(၃)စခန်းနေရာကို တက်သိမ်းဖို့ကြိုးစားတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ထောင်ထားတဲ့ မိုင်း(၅)လုံး ပေါက်ကွဲပြီး သူတို့ရှေ့ဆက်မတက်ရဲတော့ဘူး။ နအဖစစ်တပ်က အနောက်ကနေပြီး (၈၁မမ)၊ (၇၅မမ)၊ (၆၀မမ) လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ကျနော်တို့စခန်းထဲ ပစ်ချတာ အလုံး(၄၀)လောက် ရှိ ပြီ။ ဒါပေမယ့် သူတို့ချဉ်းကပ်လို့ မရဘူး။ ကျနော်တို့ ရရှိတဲ့ကြားဖြတ် စက်သတင်းအရ ဒီညသူတို့စစ် ကူတွေ လာမယ်။ ပြီးရင် ကျနော်တို့စခန်းကို တက်ရှင်းမယ်လို့ သိရတယ်။ ကျနော်တို့ဖက်ကလည်း သူ တို့နဲ့ ရင်ဆိုင်ဖို့ အဆင်သင့်ပဲ။ DKBAနဲ့ နအဖစစ်တပ်တွေဟာ ထိုင်းဖက်ကဝင်ပြီး ကျနော်တို့ကိုပိုင်းဖို့ လုပ်နေတယ်လို့ သိရတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ မရအရခုခံသွားရမှာပဲ”ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောသည်။
နံနက်လင်းအားကြီးအချိန်က စတင်ခဲ့သည့် ပစ်ခတ်မှုများသည် ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပစ်ခတ်ခြင်းအဆင့် မျိုးမရှိသေးသည့်အတွက် နှစ်ဖက်အကျအဆုံး အခြေအနေကို မသိရှိရသေးသော်လည်း မိမိတို့မိုင်း(၅) လုံးပေါက်ကွဲခဲ့မှုတွင် DKBA တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများ ရရှိနိုင်သည်ဟု ၎င်းက ဆက်ပြော သည်။
နောက်ထိုင် မြန်မာစစ်တပ်မှ အကူပစ်ပေးသည့် လက်နက်ကြီးကျည် အလုံး(၄၀)ခန့်မှာ ထိုင်းနိုင်ငံ အတွင်းသို့ ကျရောက်ပေါက်ကွဲခြင်း မရှိသေးဟု အုန်းဖန်နှင့်မဲဆောက် လိုင်းကားမောင်းသူတဦးက ပြောသည်။ အဆိုပါ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ထိုင်းလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေး တိုးမြင့်ချထား ကြောင်း မြန်မာဘက်ခြမ်းမှ ရွာသားများ ထိုင်းဘက်ခြမ်းသို့ တိမ်းရှောင်လာမှုများ မရှိသေးကြောင်း သိ ရှိရသည်။
ယခုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဒေသတွင် နယ်မြေစိုးမိုးရေးရရှိရေးအတွက် DKBAနှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့သည် ယခုနှစ်အတွင်း အကြိမ်ကြိမ်ဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှုများ ရှိသော်လည်း စခန်းသိမ်းနိုင်သည့် အနေအ ထား မရှိသေးကြောင်း သိရှိရသည်။
နအဖနှင့် DKBA၏ ထိုးစစ်ဆင်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေး တပ်မတော် ဒုတိယစစ်ဦးချုပ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောဖလဲခို့(ခေါ်) စောအော်လီဗာက “ကျွန်တော်တို့ ဘက်ကတော့ စစ်ရေးနည်းနဲ့ဖြေရှင်းတာကို မလိုချင်ပေမဲ့ သူတို့ဘက်က ထိုးစစ်ဆင်လာရင်တော့ တော်လှန်စစ်ရဲ့ သဘောအရ ခုခံကာကွယ်စစ်ကိုဆင်နွဲဘို့ အရံသင့်ရှိတယ် လက်အောက်ခံ တပ်မဟာ တပ်ရင်း တပ်ဖွဲ့တွေကို ညွန်ကြားထားပြီးဖြစ်တယ် အဓိက ခံစစ်ရှင်ပြောက်ကြားစနစ်ကို သုံးပြီး ရန်သူ ကို ရင်ဆိုင်မှာဖြစ်တယ်”ဟုပြောသည်။
နအဖအနေနှင့် မြန်မာပြည်၏နိုင်ငံရေးပြဿနာများကို စစ်ရေးနည်းဖြင့်ဖြေရှင်း၍ မရကြောင်း KNUနှင့် တိုက်နေသည်မှာနှစ် (၆၀)ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေးကို အပြောနှင့်မဟုတ်ဘဲ လက်တွေ့ အကောင်အထည်ဖေါ်မှသာ စစ်မှန်သည့် တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရမည်ဆိုသည့်အချက်ကို သ ဘောပေါက်သင့်သည် ဟုလည်းဖြည့်စွက်ပြောသည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:56 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:37 PM0comments
၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် (၉)ဦးကို ထောင် (၆)လစီ ပြစ်ဒဏ်ချ
ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် (၉)ဦးတို့အား တရားရုံးကို မထီမဲ့မြင်လုပ်မှုဖြင့် ယမန် နေ့က အင်းစိန်ထောင်တွင်း သီးသန့်တရားရုံး၌ ထောင် (၆) လစီ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း ၎င်းတို့အတွက် အမှု လိုက်ပေးနေသည့် ရှေ့နေ ဦးအောင်သိန်းကပြောသည်။
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် (၉)ဦးအနက် မင်းကိုနိုင်၊ကိုကိုကြီး၊ ကိုပြုံးချို၊ ကိုမင်းဇေယျ၊ ကိုဌေးကြွယ်၊ ကိုမြအေး၊ ကိုအောင်သူ၊ ကိုလှမျိုးနောင်နှင့် ကိုအောင်နိုင်တို့ပါဝင်သည်။ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက တရားခွင်၌ မိသားစုကြားနာခွင့်မရသည့်အပေါ်ဆန္ဒပြသည့်အနေဖြင့် ရှေ့နေ များ၏ မေးမြန်းချက်များအား ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မရှိသဖြင့် တရားရုံးက ပြစ်ဒဏ်စီရင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ရှေ့နေဦးအောင်သိန်းက “ ပြီးခဲ့တဲ့ရုံးချိန်းတွေမှာ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကတည်းကတင်ပြတာပေါ့ဗျာ။ သူတို့ တောင်းဆိုတဲ့ မိသားစုကြားနာခွင့်မရမချင်း ကျနော်တို့ရှေ့နေတွေကို သူတို့နဲ့ပတ်သက်တာ မမေးမြန်းပါနဲ့ သူတို့ လည်း မမေးမြန်းဘူးဆိုပြီး တရားရုံးကို တင်ပြတာရှိတယ်ပေါ့။ အဲဒီအပေါ်မှာ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိက ပုဒ်မ ၂၂၈ ပေါ့လေ တရားစစ်ဆေးတာကို အနှောက်အယှက်ပေးတယ့် အရေးယူပေးပါဆိုပြီး တရားသူကြီးကို လျှောက်တယ်။ တရားသူကြီးက လက်ခံပြီးတော့ ပြစ်ဒဏ် (၆)လ ချလိုက်တာပဲ” ဟုပြောကြားသည်။
ယခုကဲ့သို့ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်သည့် အပေါ် ၈၈ ကျောင်းသားများက အယူခံဝင်မည်မထင်ကြောင်း၊ ယခုပြစ် ဒဏ်သည် ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ မူလရင်ဆိုင်နေရသည့် အမှုစွဲချက်များနှင့် မသက်ဆိုင်ဘဲ သီးသန့် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် (၉)ဦးတို့အနေဖြင့် မူလအမှုများကို အချုပ် ထောင်ကျ အကျဉ်းသားများအဖြစ် ဆက်လက်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးအောင်သိန်းက ရှင်းပြသည်။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များကို ယမန်နှစ် သြဂုတ်လ လောင်စာဆီဈေးချပေးရေး လမ်းလျှောက် ဆန္ဒပြမှုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အရေးပေါ်စီမံချက်အက်ဥပဒေ၊ မတရားသင်းဆက်သွယ်မှု၊ တရားမ၀င် နိုင် ငံခြားငွေကိုင်ဆောင်မှု၊ ပုံနှိပ်ဥပဒေတို့ အပါအ၀င် အနည်းဆုံးပုဒ်မ (၁၀)ခုခန့်ဖြင့် စစ်အစိုးရက စွဲချက်များ တင်ထားသည်။ ၎င်းတို့အမှုရင်ဆိုင်နေရစဉ်အတွင်း မိသားစုဝင်များ တရားရုံးသို့လာရောက်ကြားနာခွင့်ကို အာဏာပိုင်များက ယခုလဆန်းပိုင်းက ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ပြီး ထောင်ဝင်စာတွေ့ခွင့်သာ ပေးထားသည်။
Posted by Sanghaalliance at 1:35 PM0comments
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဦးဥာဏ်ဝင်း၏ မြောက်ကိုရီးယား ခရီးစဉ်သည် အရှေ့တောင်အာရှမှ အထီးကျန် မြန်မာနိုင်ငံနှင့် အတွေးအခေါ် ဆင်တူသည့် နိုင်ငံများကို မိတ်ဆွေဖွဲ့သည့် ခရီးစဉ်တခု ဖြစ်သည်ဟု ဆန်းစစ်လေ့လာသူတဦးက ပြောသည်။
Posted by Sanghaalliance at 4:48 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 4:44 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 4:43 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 4:41 PM0comments
Posted by Sanghaalliance at 4:37 PM0comments
ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျန်းမာရေးကို စစ်ဆေးရန်အတွက် သူ၏ မိသားစုဆရာဝန်နှင့် လာမည့် လဆန်းပိုင်းတွင် ထပ်မံ တွေ့ဆုံဦးမည်ဟု ပါတီ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ယနေ့ ပြောဆိုသည်။
Posted by Sanghaalliance at 12:18 AM0comments
ဗုံးကြောင့် သေဆုံးသူမှာ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း စွမ်းအားမြှင့် ၀န်ခံ
စွမ်းအားမြှင့် မြန်မာကျောင်းသား စစ်သည်တော်များအဖွဲ့ (VBSW) ဟုခေါ်သော လျှို့ဝှက် သိပ်သည်းလှသည့် အဖွဲ့က အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က ရန်ကုန်မြို့ ဆင်ခြေဖုံးဒေသ ရွှေပြည်သာတွင် သေဆုံးသွားခဲ့သူမှာ သူတို့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံ ကြေညာလိုက်သည်။
ပြည်ပရှိ မြန်မာအတိုက်အခံ အသိုင်းအ၀ိုင်းအကြား ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည့် အီးမေးလ်တွင် ကိုသက်ဦးဝင်းမှာ သူတို့၏ မြေအောက် အဖွဲ့ဝင်တဦး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွှေပြည်သာရှိ နေအိမ်တွင် ဗုံးပေါက်ကွဲ သေဆုံးသွားသည့်သူ့အား ဦးညွှတ် ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းဖြင့် (VBSW) က ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။
သက်ဦးလွင် ခေါ် သန်းလွင်၊ ကိုယ်ပိုင်အမှတ် ၉၉၉၉၅၄ သည် မသေဆုံးမီက ရန်ကုန်မြို့တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် အဆိုပါအဖွဲ့က ပြောဆိုသည်။ သူသည် အဖွဲ့ဝင်များစွာထဲမှ တဦးသာဖြစ်ပြီး စစ်အာဏာရှင်များ၏ အကြမ်းဖက် အုပ်စိုးမှုကို အကြမ်းဖက်နည်းဖြင့် တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်သွားရန် ကတိပြုကြောင်းလည်း ဆိုထားသည်။
`ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံပြီး တိုက်ပွဲအသီးသီးမှာ ကျဆုံးခြင်း၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်းများ ဖြစ်ခဲ့သည့် သူရဲကောင်းများကို ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းတင်သလို စစ်အာဏာရှင်များက ပြည်သူအား ဖိနှိပ်နေသမျှ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားနေသူများအား ဖမ်းဆီး နှိပ်စက်နေသမျှ၊ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များထံ အာဏာလွှဲပြောင်း မပေးသမျှ ကာလပတ်လုံး မိမိတို့ တိုက်ပွဲဝင်မှုများ မည်သို့မှ ရပ်တန့်သွားမည် မဟုတ်ကြောင်း စစ်အာဏာရှင်များအား သတိပေးလိုက်သည်´ ဟု (VBSW) ၏ ကြေညာချက်တွင် ရေးသားဖော်ပြသည်။
ကိုသက်ဦးဝင်းသည် သံဃာဟောင်းတဦးဖြစ်ကာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် တော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသား ဘ၀ကတည်းက အစိုးရဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှု အများအပြားတွင် ပါဝင် ဆင်နွှဲခဲ့ကြောင်းလည်း ပြောဆိုထားသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန် ဆင်ခြေဖုံးရှိ ရွှေပြည်သာတွင် လူတဦးသည် ဗုံးတပ်ဆင်နေစဉ် ထိုဗုံးဖြင့်ပင် သေဆုံးသွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ဆိုသည်။
အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင်မူ သက်ဦးဝင်းမှာ အရက်သမားတဦးဖြစ်ကာ အလုပ်အကိုင်မရှိ အခြေအနေမဲ့ ဖြစ်ကြောင်း၊ ရဟန်းဘောင်သို့ မကြာခဏ ၀င်ခဲ့ဖူးပြီး ယခုအခါ အရပ်သားအဖြစ် နေထိုင်နေကြောင်း ရေးသားထားသည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ဆန္ဒပြပွဲများအပြီးတွင် ထိုင်း-မြန်မာနယ်စပ်သို့ ထွက်ခွါသွားခဲ့ကြောင်း ပြောသည်။
VBSW အဖွဲ့ကို ထင်မြင်ချက်ပေးရန်နှင့် အတည်ပြုရန် ဆက်သွယ်ရာ မရရှိဘဲ ယခင်ကလည်း ရန်ကုန်တွင် ဖြစ်ပွါးခဲ့သည့် အလားတူ ပေါက်ကွဲမှုများကို သူတို့ လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာဖူးသည်။
ထိုပေါက်ကွဲမှုများမှာ ဧပြီလက ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ စားသောက်ဆိုင်တခုအနီး ပေါက်ကွဲခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုနှင့် ဇူလိုင်လအတွင်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးအတွင်း ပေါက်ကွဲခဲ့သော ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတို့ ပါဝင်သည်။
ထိုအတောအတွင်း ပန်းဘဲတန်း ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးရုံးကို သောကြာနေ့က ဖုံးခေါ်ပြီး ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခဲ့သူ တင်မြင့် ဆိုသူကိုလည်း ရဲက ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းဖြင့် အင်္ဂါနေ့ထုတ် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာတွင် ရေးသားဖေါ်ပြသည်။
အဆိုပါ ကိုတင်မြင့်က ပန်းဘဲတန်းကြံ့ဖွံ့ရုံးနှင့် ရဲစခန်းတို့ကို ဖေါက်ခွဲပစ်မည်ဟု ခြိ်မ်းခြောက်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုအခါ စစ်အစိုးရ အုပ်စိုးနေသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဗုံးပေါက်ကွဲမှုများမှာ အရင်ထက်ပို၍ ဖြစ်ပေါ်နေပြီး၊ စက်တင်ဘာလအတွင်း ဗုံး ၄ ကြိမ် ပေါက်ကွဲခဲ့သည်။
Posted by Sanghaalliance at 12:17 AM0comments
အာဏာရှင်မှောင်ရိပ်၌ မြန်မာအမျိုးသမီးများ ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆိုးရွားစွာခံနေရ
အာဏာရှင်စနစ်ကြီးစိုးသည့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ကျားမခွဲခြားဆက်ဆံမှုကို အစီစဉ်တကျ ကျူးလွန်ဖောက်ဖျက်ခံနေရသည်ဟု အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ) WLB က အစီရင်ခံစာ ယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်ကာ ထုတ်ဖော်ပြောကြားသည်။
‘အာဏာရှင်ကြီးစိုးမှုမှောင်ရိပ်’ ဟု အမည်ပေးထားသည့် ယင်းအစီရင်ခံစာ၌ အမျိုးသမီးနှင့် မိန်းခလေးငယ်များ လူကုန်ကူးခံနေရမှု၊ ပညာရေးတွင် သမီးမိန်းခလေး၏ ပညာရေးကို သားယောက်ကျားလေး၏ ပညာရေး လောက်ဦးစားပေးမခံရမှု ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုးဝါးသဖြင့် အမျိုးသမီး(၁၂)ဦးတွင် (၁) ဦး ကိုယ်ဝန် ဆောင်နေစဉ် သေဆုံးနေရမှုနှင့် ကျေးလက်နှင့်တိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ နအဖ စစ်တပ်၏ အမျိုးသမီးများအပေါ် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု များကို ဒေသခံအမျိုးသမီးများနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်များနှင့် တကွ တင်ပြ ထားသည်။
ထို့ပြင် အာဏာရှင်စနစ်ကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကျင့်သုံးနေမှုကြောင့် မြန်မာ့လူမှုအသိုင်းအ၀န်း၌ အမျိုးသား များလွှမ်းမိုးနေပြီး စစ်တပ်သည် မြို့တိုင်း၊ ရွာတိုင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်တိုင်း၊ အသင်းအဖွဲ့တိုင်းကိုပါ ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း လတ်တလော ရေးဆွဲအတည်ပြုထားသည့် အခြေခံဥပဒေသည်လည်း ကျား၊မတန်း တူရေးကိုအာမခံချက် မပေးရုံသာမက အမျိုးသားများကြီးစိုးသည့် စစ်တပ်ကို လွှတ်တော်အရပ်ရပ်တွင် လေးပုံတပုံချုပ်ကိုင်ရန် သတ်မှတ်ထားသည်ဟုလည်း ဝေဖန်ထောက်ပြထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ရှိနေသည့် ရှေးရိုးစွဲ ပုံစံခွက်ဓလေ့ထုံးတမ်းများကြောင့် မြန်မာအမျိုးသမီးများမှာ နဂိုကတည်းက နှိပ်ချခွဲခြားဆက်ဆံခံနေကြရရာမှ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် ပို၍ ခွဲခြားနှိပ်ချဆက်ဆံခံနေရသည်ဟု WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မနန်းယဉ်ကပြောသည်။
၎င်းက “ အမျိုးသမီးတွေ ကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှုကရှေးရိုးစွဲကမ္ဘာကြီးမှာရှိခဲ့တယ်။ အဲဒါတွေကိုပယ်ဖျက်ဖို့ နိုင်ငံ တကာသဘောတူစာချုပ်တွေမှာ ပြောထားတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်တွေ့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့အောက်မှာ ဒီဟာ ပယ် ဖျက်ဖို့ လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဆက်ပြီးတော့ စစ်အာဏာရှင်စနစ် ကြီးစိုးနေသရွေ့တော့ ကျား၊ မတန်းတူရေး ဆိုတာ ကိုဘယ်လိုမှမျှော်လင့်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ စစ်တပ်အာဏာပိုင်တွေကနေချိုးဖောက်တဲ့ အမျုိးသမီးတွေပေါ်အကြမ်း ဖက်မှုတွေကို အရေးယူလို့မရဘူးပါဘူး။ မရတဲ့အခါ ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုတွေပိုပြီးတော့ ဖြစ်လာပါတယ် ”ဟု ပြောသည်။
အမျိုးသမီးများအား နည်းမျိုးစုံဖြင့် ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ပပျောက်ရေးနိုင်ငံတကာသဘောတူစာချုပ် (CEDAW) ကို မြန်မာနိုင်ငံက လက်မှတ်ရေးထိုးထား၍ စာချုပ်ပါကတိများအတိုင်း မြန်မာစစ်အစိုးရက ဆောင်ရွက်ခြင်း မရှိ ကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြချက်များကို လာမည့် နိုဝင်ဘာ (၃)ရက် ဂျနီဗာ၌ ကျင်းပမည့် (၄၂)ကြိမ်မြောက် စီဒေါ ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တင်ပြသွားမည်ဟု WLB ကဆက်လက်ပြောကြားသည်။
အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် (မြန်မာနိုင်ငံ)ကို ကရင်၊ကရင်နီ၊ရှမ်း၊ကချင်၊ရခိုင်၊ဗမာ၊ထားဝယ်၊ပအိုဝ့်၊ပလောင်၊ လားဟူ၊ ကူကီး စသည့် တိုင်းရင်းသား အမျိုး သမီးအဖွဲ့ (၁၂)ဖွဲ့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပြီး ထိုင်းနိုင်ငံတွင်အခြေစိုက်သည်။
Posted by Sanghaalliance at 12:14 AM0comments
ရန်ကုန်မြို့ရှိ နိုင်ငံရေးသမားကြီး(၃)ဦးတို့ သည် ဟောင်ကောင်ရှိ တက္ကသိုလ်တခုတွင် မြန်မာ့အရေးဆွေးနွေး တင်ပြရန် လာမည့် ဒီဇင်ဘာလ၌ ဟောင်ကောင်သို့ သွားရောက်ရန်စီစဉ်နေကြောင်း ကာယကံရှင်များက ခေတ်ပြိုင်သို့ ပြောပြသည်။
ထိုသို့သွားရောက်ရန် ဟောင်ကောင်မြို့တော်တက္ကသိုလ် အာရှနှင့်နိုင်ငံတကာလေ့လာရေးဌာန လက်ထောက် ပါမောက္ခ ဒေါက်တာ ကျော်ရင်လှိုင်က စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ဖိတ်ကြားခံရသူများအနက် သခင်လှကွန်း၊ သခင် တင်မြနှင့် ရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးရွှေအုံးတို့ပါဝင်ကြောင်းနှင့် ရဲဘော်ချစ်လှိုင်မှာ မျက်စိမကောင်းသဖြင့် သွားနိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်း သခင်လှကွန်းက ခေတ်ပြိုင်သို့ပြောသည်။
၎င်းက “ ဒီဇင်ဘာကျမှပါ။ ရက်လည်းမသိသေးဘူး။ ပထမအပတ်အကုန်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ အခုကြိုး စားတုန်းပဲ။ ပတ်စ်ပို့တွေဘာတွေရအောင်၊ ဆွေးနွေးပွဲ ခေါင်းစဉ်တောင်မသိရသေးဘူး။ ကျော်ရင်လှိုင်လာတုန်းက ပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောမသွားဘူး။ ဗမာပြည်အကြောင်းဆွေးနွေးကြမှာနဲ့တူပါတယ်။ ဗမာပြည်မှထွက်တဲ့ တချို့ဂျာနယ် တွေထဲမှာ ကျနော်တို့နဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်လို့ပါသွားတာတွေ၊ တချို့ထင်မြင်ချက်လေးတွေပြောတာတွေကို တွေ့ပြီး တော့ခေါ်တာလို့ထင်ပါတယ်”ဟုပြောသည်။
မည်သည့် အကြောင်းအရာကိုဟောပြောရမည်ဆိုသည်ကို မစဉ်းစားရသေးကြောင်းနှင့် ပြောခွင့်ရမည်ဆိုပါက သခင်သိန်းဖေနှင့်ဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီးများ၏ သူမနာကိုယ်မနာ ညီညွတ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးလမ်းစဉ်ကို ပြောပြလိုသည်ဟု သခင်လှကွန်း ကပြောသည်။
ရှမ်းဝါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးရွှေအုံးကလည်း ဟောင်ကောင်သို့ သွားခွင့်ရပါက ၎င်းရေးသားဖြန့်ချိထားသည့် မပြိုကွဲသင့်သောပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ကြပါဆိုသည့် စာတမ်းကို အခြေခံ၍ ဟောပြောဆွေးနွေးမည်ဟု ခေတ်ပြိုင်သို့ပြောသည်။
သခင်တင်မြနှင့် သခင်လှကွန်းတို့သည် ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖွဲ့နှင့်လုံးဝသက်ဆိုင်မှုမရှိ ကြောင်း နှင့် ၎င်းတို့၏ဟောင်ကောင်ခရီးစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ပြောကြားစရာမရှိကြောင်း သခင်သိန်းဖေခေါင်းဆောင် သည့် ၀ါရင့်နိုင်ငံရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များအဖွဲ့ကပြောသည်။
၀ါရင့်နိုင်ငံရေးသမားကြီး ဦးမင်းလွင် က “ သူတို့က အဘတို့ထဲမှာမပါဘူး။ အမြင်တွေလဲမတူဘူး။ လုံးလုံးကွဲ တယ်။ ဒေါက်တာကျော်ရင်လှိုင်တို့ ရောဘတ်တေလာတို့ကလည်းသူတို့နဲ့ တပေါင်းတစည်းထဲပါ။ ဒီမိုကရေစီအင် အားစုတွေက အထူးသဖြင့် အန်အယ်လ်ဒီက တင်းမာနေလို့ ဒီမိုကရေစီမရတာလို့ အမြင်ရှိသူတွေပါ။ ဒီ အယူအဆကို ရှင်းရှင်း ပြောရရင် သခင်တင်မြတို့ သခင်လှကွန်းတို့က သဘောကျတာ။ အထူးသဖြင့် ဖွဲ့ စည်းပုံနဲ့ပတ်သက်ရင် မကြိုက်ဘူး။ ကြိုက်တယ်မပြောဘဲနဲ့ မရှိတာထက် ရှိတာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အယူ အဆမျိုးရှိသူတွေပါ” ဟုပြောကြားသည်။
Posted by Sanghaalliance at 12:13 AM0comments
ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များက မမှန်မုန်တိုင်းသတိပေးချက်ထုတ်ပြန် ရန်ကုန်မြို့ခံများအထိတ်တလန့်ဖြစ်
ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်း နအဖစစ်အစိုးရ၏ မမှန် မုန်တိုင်းကြိုတင်သတိပေးချက်ကြောင့် ပြည်သူအများ ထိတ်လန့် စိုးရိမ်ခဲ့ကြသကဲ့သို့ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်နေကြကြောင်း ရန်ကုန်မြို့ခံများက ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာ (၂၅) ရက် စနေနေ့ညနေနှင့် ညဘက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့ဆင်ခြေဖုံး လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊ လှည်းတန်းစသည့် မြို့နယ်တို့တွင် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အာဏာပိုင်များက နောက်ထပ် (၃၆) နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းတခု ၀င်စရာရှိကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ပြည်သူများ သတိရှိရှိနေထိုင်ကြရန်နှင့် လိုအပ်သည်များကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားကြရန် လိုက်လံနှိုးဆော်ခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
လှည်းတန်းတွင် နေထိုင်သူတဦးက “စနေနေ့ ညနေ (၆) နာရီခွဲလောက်က လမ်းထဲမှာ အသံချဲ့စက်နဲ့လှည့်ပြီးအော်တယ်။ နောက်ထပ် (၃၆) နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းကြီးတခု ၀င်နိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုက်ကြေညာတယ်လေ” ဟု ပြောသည်။
ထိုသို့ မြို့နယ်များအတွင်း မုန်တိုင်းသတိပေး နှိုးဆော်မှုများကြောင့် ရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မုန်တိုင်းဝင်ရန် ရှိ မရှိ၊ မိုးလေ၀သနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသို့ ခေတ်ပြိုင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သည်။
တာဝန်ခံဖြေဆိုသူက ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသည့် မုန်တိုင်းငယ်သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မြောက်အရှေ့ယွန်းယွန်းသို့ ဆက်လက်ရွေ့ရှားနေကြောင်း၊ ထို့နောက် (၃၆) နာရီအတွင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ အရှေ့မြောက်ကမ်းခြေနှင့် ၎င်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ကျော်ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်မည့်အကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းတို့တွင် မိုးကြီးနိုင်ကြောင်း ဖြေကြားသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်အချို့တွင် မုန်တိုင်းဝင်မည်ဆိုကာ အသံချဲ့စက်များနှင့် လိုက်လံကြေညာနေခြင်းသည် ၎င်းတို့မိုးလေ၀သဌာန၏ အကြောင်းကြားချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်း၊ မုန်တိုင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို ၎င်းတို့အနေဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ဖြေကြားနေရကြောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အဆင့် အာဏာပိုင်များ၏ ညွှန်ကြားချက်အရ ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များက လုပ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ကြောင်း အဆိုပါ ဖြေကြားသူက ပြောသည်။
ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များ၏ ကြေညာချက်ကြောင့် ပြည်သူများမှာ နေအိမ်ခေါင်မိုးပြုပြင်ခြင်း၊ တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများကို လုံခြုံသည့်အဆောက်အဦများဖြစ်သည့် ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ဆွေမျိုးနေအိမ်များသို့ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း လုပ်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
နောက်နေ့ တနင်္ဂနွေထုတ် အစိုးရသတင်းစာများတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှ မုန်တိုင်းသည် နောက် (၃၆) နာရီအတွင်း အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလာဒေ့ရှ် အနောက်ဘက်ကမ်းခြေကို ဖြတ်ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းကို ၀င်ရောက်မည်၊ မြန်မာနိုင်ငံနှင့်ပတ်သက်၍ တချို့ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းတို့တွင် မိုးကြီးမည်၊ ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တွင် တနာရီမိုင် (၄၀) နှုန်းခန့် လေတိုက်ခတ်နိုင်သည်ဟုသာ ဖော်ပြထားသောကြောင့် အာဏာပိုင်များ၏ ကြေညာချက်အရ စိုးရိမ်ပူပန်ခဲ့ကြသည့် ပြည်သူများက စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်ကြကြောင်း သိရသည်။
ယခုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ နာဂစ်မုန်တိုင်း မတိုင်မီကာလနှင့် မုန်တိုင်းပြီးကာလတွင် မိုးလေ၀သဦးစီးဌာန၏ ဆောင်ရွက်ချက်များကို သုတေသနပြုလုပ်နေသည့် ကုလသမဂ္ဂလက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းတခုမှ နိုင်ငံခြားသားသုတေသီတဦးကမူ နအဖအာဏာပိုင်အဖွဲ့၏ ယန္တရားကို ထောက်ပြဝေဖန်သည်။
၎င်းက “ အစိုးရအာဏာပိုင်တွေက တကယ်မုန်တိုင်းဝင်မယ့် အခြေအနေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တုန်းကတော့ ပြည်သူတွေကို တိတိကျကျ အသိပေးဖို့၊ လိုအပ်တဲ့ အကူအညီပေးဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ကြတယ်။ အခု မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ မပတ်သက်တဲ့ မိုးလေ၀သသတင်းကိုတော့ မလိုအပ်ဘဲ သတင်းမှားတွေ ပေးနေတယ်။ ဒါကြောင့် ပြည်သူတွေ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်ပြီး တကယ့်မုန်တိုင်း ၀င်ရောက်မယ့်အခြေအနေရှိရင် ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘဲ အသက်အိုးအိမ်တွေ ဆုံးရှုံးမှာ စိုးရိမ်ရတယ်” ဟု ပြောကြားသည်။
Posted by Sanghaalliance at 12:12 AM0comments
နေအိမ်အကျယ်ချုပ် ကျခံနေရသော ရန်ကုန်ရှိ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နေအိမ်အနီးမှ သံဆူးကြိုး အတားအဆီးများကို မြန်မာစစ်အစိုးရက တနင်္ဂနွေနေ့ကတည်းက ဖယ်ရှားလိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သူမ၏ ပါတီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ပြောသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပေါ်ပေါက်လာမည့် ရုပ်သေးအရပ်သားအစိုးရသစ်အတွက် ရည်ရွယ်ဆောက်လုပ် နေသည့် နေပြည်တော် လွှတ်တော်အဆောက်အဦတွင် ၂၀၀၉ ခု စက်တင်ဘာလမှ စတင်၍ ရုံးဝန်ထမ်းများ စတင်ရုံးထိုင်တော့မည်ဟု ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး သတင်းရပ်ကွက်က ပြောသည်။
Posted by Sanghaalliance at 9:33 PM0comments
နန်းတော်ကြီး၏ ညီလာခံသဘင်ခန်းမဆောင်ကြီး၌ကား မှူးမတ်သေနာပတိတို့စုံညီနေပေပြီ။ ညီလာခံသဘင် စတင်ချိန်ကျော်သည်အထိ ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးကားထွက်တော်မမူသေး။ မှူးမတ်အပေါင်းတို့လဲ လက်ဆောင်ပဏ္ဍာတော်မည်မျှရကြောင်း တစ်ဦးကိုတစ်ဦးကြွားဝါရင်းမင်းတရားကြီးအားစောင့်မျှော်ကြကုန်၏။ ယနေ့ထူးခြားစွာကျင်းပသောညီလာခံသည်ကား လယ်ယာမြေသစ်များဖော်ထုတ်ရန်အတွက် ခေါ်ယူရခြင်းပေ တည်း။
ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးကား ရာဇပုလ္လင်ပေါ်တက်ပြီးသကာလဟိုဟိုဒီဒီမေးလေ၏။ လယ်ယာမြေသစ်များဘယ်သို့ဘယ်ပုံဖော်ထုတ်ရန်အကြောင်းဆက်ကြလေသော်သစ်တောဝန်မင်း ကကျွန်ပင်ကြီးများခုတ်၍ လယ်ရာမြေ သစ်များဖော်ထုတ်သော်ကောင်း၏ဟုလျှောက်တင်လေ၏။ ပညာရေးဝန်မင်းကလဲ ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီး၏ တိုင်းနိုင်ငံတော်တွင် စာပေသင်ကြားရေးကျောင်းများရှိသည့်အလျှောက် ကျောင်းတွင်းမြေပို (ယခုခေတ် ကျောင်းဘောလုံးကွင်းကဲ့သို့နေရာများ) နေရာများကို လယ်ရာမြေများအဖြစ်ဖော်ထုတ်ပါက ကျောင်းသားများ လည်းစိုက်ပျိုးရေးပညာရပြီးမျိုးစေ့အတွက်လည်း ကျောင်းသားမိဘများထံမှရနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း လျှောက်တင် လေ၏။ (ဉာဏ်ကြီးကြပေ၏..ဤကားစကားချပ်)
၀န်မင်းအပေါင်းတို့လဲ မိမိနိုင်ရာနေရာများမှလယ်ယာမြေသစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါက ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီး၏ မျက်နှာသာ ပေးခြင်းခံရငြား ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်မစဉ်းစားနိုင်ဘဲ အထူးထူးအပြားပြားတင်လျှောက်ကြကုန်၏။ နောက် ဆုံးသကာလ မိုးတွင်းအခါရေမြုပ်တတ်ကုန်သောနေရာ (ယခုခေတ်အခေါ်ရေနက်ကွင်း) နေရာများအား လယ် မြေသစ်အဖြစ်ဖော်ထုတ်နိုင်ပါက လယ်မြေတင်မကငါးများပါတစ်ပါတည်းမွေးနိုင်မည့်အတွက် အလွန်အကျိုးရှိ မည်ဖြစ်သဖြင့်ဤဒေသကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုစေရန်လယ်ဝန်မင်းအား စေခိုင်းတော်မူလေ၏။ လယ်ဝန်မင်းက မသွားလိုလှသော်လည်း ပြန်ပြောခြင်းငှာ မစွမ်းသာသောကြောင့် ဤအကြံအားပေးသည့် ၀န်မင်းကိုသာ စိတ် ထဲမှကြိတ်၍ကြိမ်ဆဲလေ၏။
ဘ၀ရှင်မင်းတရားကြီးကိုယ်စား လယ်ဝန်မင်းကြီးကြွချီစစ်ဆေးမည်ဟူသောသတင်းမှာတောသူတောင်သား လယ်သမားတို့အကြားလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်ကြရ၏။ နယ်စားလယ်ဝန်ကလေးမှလဲ လယ်ဝန်မင်းကြီး မည်မျှတော် ကြောင်းမကြာခဏပြောတတ်သည့်အတွက်ပို၍စိတ်ဝင်းစားကြကာလယ်ဝန်မင်းကြွချီလာပါက သွားရောက် ကြည့်ရှုရန်စိုင်းပြင်းကြကုန်၏။ လယ်ဝန်မင်းလည်း ခမ်းနားကြီးကျယ်သောမဏ္ဍပ်တော်ကိုတွေ့သည်တွင်ဘ၀င် လေဟပ်ပြီးကျေနပ်တော်မူလေ၏။ လယ်ဝန်မင်းလည်းအရာရာသိသည့်ဟန်ဆောင်၍လယ်ဝန်ကလေးနှင့် လယ် သမားကြီးများတင်လျှောက်ကြသည်ကိုခေါင်းတညိတ်ညိတ်နားထောင်တော်မူလေ၏။ ကြားဖြတ်၍လည်း ဟိုဟို ဒီဒီ မေးမြန်းတော်မူလေ၏။
အသီးသီးတင်လျှောက်ပြီင်္းဆီးကြကုန်သော် ရေမြုပ်နေကုန်သောလယ်မြေတို့အားစပါးမည်သို့စိုက်သင့်ကြောင်း တင်လျှောက်ကြရန်ဝန်မင်းကမိန့်တော်မူလေ၏။ ထိုအခါသော် လယ်သမားကြီးတစ်ဦးမှ ရေမြုပ်နေကုန်သော မြေများတွင်ဒေါင်းစပါးပေါက်ကြကုန်၏ဟုတင်လျှောက်လေ၏။ ထိုအခါသော် ၀န်မင်းကြီးမှလည်း စကားစကို ဖြတ်စေလျှက် "ဟဲ့လယ်ဝန်းကလေး.. မောင်းမင်းတို့မလဲဒေါင်းစပါးရသော်ဒေါင်းစပါးကို ပစာကြောင့် မစိုက်ကြသနည်း" ဟုခတ်တည်တည်ဖြင့်ဟောက်လိုက်လေ၏။ ထိုအခါသော် လယ်ဝန်ဝန်ကလေးလည်း မည် သို့မည်ပုံတင်လျှောက်ရမည်မသိအခက်တွေ့နေ၏။ ၀န်မင်းကြီးအားလာရောက်ကြည့်ရှုကြကုန်သော လူအပေါင်းသည်လည်း ၀န်းမင်း၏ တော်ပုံကိုဂရုပြုမိကြကုန်ဟူ၏။
မှတ်ချက်။ ။ ဒေါင်းစပါး ... ရေမြုပ်မြေများ၌ပေါက်သည့်ကိုင်းမြက်ရှည်တစ်မျိုး ++++++++++++++++++
ကျွန်တော်တို့နှစ် တက္ကသိုလ်စတက်တော့ YTU, PTU ဆိုပြီး ရန်ကုန် YIT ကိုနှစ်ခြမ်းစခွဲတဲ့နှစ်။ ကျောင်းသား တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာ ဘာကိုမှန်းမသိ (တကယ်ကတော့သိပါတယ် :D) တဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေနဲ့ ကျောင်းအသီးသီး ကို ရောက်လာကြတယ်။ ကျွန်တော်တို့ပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေဆိုပိုပြီးခံစားရတာပေါ့။ YIT ဆိုတာကျွန် တော်တို့ရဲ့အိမ်မက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အနာဂတ်လို့ထင်ထားတာလေ။
တကယ်တက်ရတော့ GTI။ ကျွန်တော် တို့ကျောင်းစတက်ပြီး တစ်လကျော်တော့ GTC ဆိုပြီးပြောင်း လိုက်တယ်။ အမယ်ထူးခြားတယ်။ ကျောင်းဆိုင်းဘုတ်ကြီးက ညတွင်းချင်းပြောင်းသွားတာနော်။ မနက်ကျောင်းတက်တော့ ကျွန်တော်တို့မှာ အံ့ဩ လို့။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်စောင့်ပြီးပြော ရသေးတယ်။ ကျောင်းထဲချက်ခြင်းကြီးဝင်မသွားဖို့လေ။ တော်ကြာစာသင်ခန်းမကြီးတွေပါညတွင်းချင်း ကောလိပ် တစ်ခုရဲ့အသွင်အပြင်တွေများပြောင်းသွားရင် စိတ်မခိုင်တဲ့တချို့လူတွေရူးသွား တချို့မိန်းမော မူးမေ့ပြီး ဆေးရုံတွေဘာတွေလိုက်ပို့ရရင် ကျောင်းကဆရာတွေရဲ့ သင်ခန်းစာတွေလွတ်သွားမှာဆိုးလို့လေ။ မဟုတ်ဘူးလား။
ဒါနဲ့တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်စောင့်ပြီး စာသင်ဆောင်ကိုတစ်ရွေ့သွားပြီး မရဲတရဲလှမ်းကြည့်လိုက်မှ စိတ်အေးသွားတယ်။ ဟူးတော်သေးတယ်။ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးပြောင်းသွားပေမယ့် ဆရာတွေရော စာသင်ဆောင် တွေရောကုန်ကုန်ပြောရရင် GTI ကျောင်းအုပ်ကြီးကနေ နတ်ရေကန်ထဲဆင်းလိုက်သလိုကောလိပ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ချက်ချင်းဖြစ်သွားတဲ့ အပျိုကြီးမမရော ဘာတစ်ခုမှပြောင်းမသွားတာတွေ့တော့မှ စိတ်အေးသွား တယ်။
အဲဒီတော့မှ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေလဲ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးရဲ့ စေတနာတွေကို တဖန်ဖန်တွေးပြီး တရေးရေးကျေးဇူးတင်လာတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ။ တကယ်လို့သာ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးပြောင်းသွားသလို ကျောင်းရဲ့ အင်္ဂါရပ်တွေပါ ကောလိပ်ကြီးလို ချက်ခြင်းကြီးများပြောင်းသွား ရင်မခက်ပေဘူးလား။ ကျွန်တော် တို့ အားလုံးရူးသွပ်သွားနိုင်တယ်လေ။ ပြီးတော့ဝန်ကြီးကိုလဲလူလို့ဘယ်ထင်တော့မလဲ။ နတ်သကြား ပေလောလို့ ထင်ကုန်မှာပေါ့။ မဟုတ်ဘူးလား။ ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်ရဲ့ ပထမလပိုင်းလေးကို ပျော်ပျော် ပါးပါး !_! ဖြတ်သန်းရင်း...
Posted by Sanghaalliance at 1:47 AM0comments
လ သာ ည များတွင် ကျမ တို့ ကလေး ဘဝ နှင့် ရွာ အကြောင်း ကို ကျမ လွမ်းလွမ်း ဆွတ်ဆွတ် သတိရ တမ်း တမိ် သည် ကျမ တို့ ရွာတရွာ သာ မဟုတ်ပါ ဘူး မြန်မာ နိုင်ငံ တဝန်းလုံး ရှိ ရွာတွေ က လည်း လသာ ည များ တွင် ခံစား မှု များ အတူတူ ဖြစ်ကြ မည်ဟု ကျမ ယုံကြည် ပါသည်။ သန့် ရှင်းကြည်လင်သည့် ကောင်း ကင် တွင် လမင်းက ထိန်ထိန်သာ နေသည်။ ရွာထဲ မှ ကလေးများ က ပျော်ရွှင်စွာ ဆော့ ကစားကြသည် လူကြီး များက ကွပ်ပျစ် ပေါ်တွင် ထိုင်ပြီး ရေနွေးကြမ်း သောက် လိုက် ထန်းလျက် ခဲလေးမြုံ့လိုက် လဘက်လေး ဝါး လိုက် နှင့် ရှေးဟောင်း နှောင်းဖြစ် က အစ ရပ်ရေး ရွာရေး တွေပြောနေကြသည်။
နောက် ကောင်း ကင်ကြီး ကို မော်ကြည့်ကြ မည် ကျမ တို့ ခေတ် သာမဟုတ် လူ့အနွယ် ဝင်လူသား များ ဖြစ်သည့် ကျမတို့ ဘိုးဘေး ဘီဘင် အဆက်ဆက်က ရှိခဲ့ပါ လိမ့်မည်။ အ မှတ် မထင် ကောင်းကင်ကြီး အား မော်ကြည့် ရင်း ထိန်ထိန်သာ နေ သည့် ဖိုး ရွှေ လမင်း ကို ငှင်း။ တလက် လက် တောက်ပ နေ ကြ သည့် ကြယ် စု များ စွာကို ငှင်း မှိတ်တုံ့ လင်းတုံ့ နှင့် အရောင် ထွက်နေ ကြသည့် ကြယ်ကလေး များ ကို ငှင်း ဘိုးဘွားဘီဘင် တို့က အမည်များ ပေးကြသည်။ ဟို --ကြယ်စုစုလေး က မောင်ရင် ဆိုင်းထမ်း -- ဟို က ဖြောက်ဆိတ် --ဟို က သောကြာကြယ် --နဂါး ငွေ့တန်းကြီး လည်း ချစ်သူတွေ လျှောက်ခဲ့ကြသည့် တံ တား ကြီးပေါ့ကွယ်-----လွမ်းဆွတ်ဘွယ် ပုံပြင်တွေပြောကြသည်။
ကျမ တို့ ဘိုးဘေး ဘီဘင် များဖြစ်သည့် လူသားများသည် ကောင်းကင်ပြင် ကြည်လင်သန့်ရှင်းသည့် ညများတွင် ကောင်းကင်သို့မော်ကြည့်မိပြီး ရင်တွင်းဝယ် လူးလွန့် လှုပ်ရှားသွားကြသည် ဘာ ဝေဒနာဟု ကိုယ့်ကိုယ်ခွဲခြား မသိကြ ထိုကြောင့် ထို ဝေဒနာကို ကင်ပွန်းတပ်လို့မရ ထိုကင်ပွန်းတပ်မရခဲ့သော ဝေဒနာကို လူ့အနွယ်ဝင် ဘိုးဘေးဘီဘင် တို့သည် ခံစားခဲ့ကြရသည်။ ထိုဝေဒနာ ကို အံထုတ်ဖေါ်ပြရန် အတွက် လူ့အနွယ်ကြီး အတွင်း ထူးထွေ ဆန်းပြား သော ပုံပြင်များ ရှိလာကြသည်။ ကဗျာ လင်္ကာ များ ဖွဲ့ခဲ့ကြသည် အထူးသဖြင့် မြေထဲ ပင်လယ်ဒေသနှင့် ဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းတို့ တွင် ထို ပုံပြင်များသည် ကြီးကျယ်ခန်းနားကြပြီး ကြွယ်ဝကြသည်။
ရသ စာပေ ကိုမြတ်နိုး တတ်ကြ သည့် မြန်မာတို့ သည် မိမိ တို့ တွင် ရှိသည့် ပုံပြင်များ နှင့် တင်းတိမ် ရောင့်ရဲခြင်း မပြုနိုင်ကြ သဖြင့် ဂင်္ဂါယဉ်ကျေးမှု ၏ အသီးအပွင့်များ အား မိမိတို့ ၏ ယဉ်ကျေးမှု ဥယျာဉ်ခြံမြေ များတွင် တယု တယ စိုက်ပျိုးခဲ့ကြသည် နေနတ်သမီး နှင့် လ နတ်သား စသည့် ပုံပြင်များ ကို ကျမ တို့ မြန်မာ လူမျိုးများသည် မိ မိတို့ အမျိုးသားဝတ်ရုံများ ဆင်မြန်း ကာ အမြတ် တနိုး မွေးစားခဲ့ကြသည် မဟုတ်ပါလား။
ကျမ တို့ မြန်မာနိုင်ငံသည် တရုတ်ပြည် အိန္ဒိယပြည်နှင့် အရှေ့ အာရှ တောင်ပိုင်းဒေသများ ၏ ပတ်ဝန်း ကျင်တွင်တည်ရှိ ကာ ရေမြေ တောတောင်များ ဆက်စပ် နေသည်။ အနောက်ဘက် တောင်တန်းကြီး များ သည် အိန္ဒိယ ပြည် အရှေ့မြောက် ဒေသ နှင့်ငှင်း အာသံ မဏိပူရ နယ်များ နှင့်ငှင်း ဆက် စပ်ပြီး ရခိုင်ကမ်းမြောင် ဒေသသည် ဘင်္ဂလားနယ် နှင့်ငှင်းဆက်စပ်သည်။ မြောက်ဘက်တောင်တန်းများသည် တရုတ်ပြည်တိဗက် နယ်နှင့်ငှင်း ဆက် စပ်ပြီး အရှေ့ဘက် ကချင်တောင်တန်း နှင့်ရှမ်းကုန်းမြေမြင့်သည် တရုတ်ပြည် ယူနန်နယ်နှင်ငှင်း ။ တောင်ဘက် တွင် လင်းဇင်း ၊ မာလာယု များနှင့်ဆက်စပ်သည်။
ထို ပထဝီ အနေအထားများ ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ သမိုင်း ဖြစ်ပေါ်တိုးတက် မှုသည် သီးခြား ကင်းလွတ်မနေပဲ ထို ဒေ သများ နှင့် ယဉ်ကျေး မှု နှင့်ဘာသာရေးများ ပါ ဆက်နွယ်လျက်ရှိကြပေသည်။ မြန်မာ ရာဇဝင်တော်ကြီး တွင်သာ ကီ ဝင် များဟု ရေးသား ဖေါ်ပြထားပြီး ခေတ်သစ် သမိုင်း ပညာရှင်များ က ပျူလူမျိုးများ ဟု ဖေါ်ပြထား သည့်လူ မျိုး နွယ်များသည် ရှေး နှစ်ပေါင်း နှစ်ထောင်ကျော်လောက် မှ စပြီး မဏိပူရ အာသံနယ်များမှတဆင့် ကဘော် တောင်ကြားလမ်းအတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာကြပြီးလျင် သူတို့နှင့် အတူ ရှေးဟောင်း အိန္ဒိယ ပြည်ကြီး ၏ အင်ဒိုအာရိယန်ယဉ်ကျေးမှုများ ကို တင်သွင်းယူဆောင်လာခဲ့ကြသည် မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ယနေ့ တိုင် လွှမ်းမိုး လျက်ရှိ သည့် အင်ဒို အာရိယန်ယဉ်ကျေးမှုသည် ယင်းပျူလူမျိုးများ ခေတ်မှ အစပြုခဲ့သည် ဟု လက် ခံ ယုံကြည်နိုင်စရာ သမိုင်းဝင်အထောက်အထား အများအပြား တွေ့ရှိရလေသည်။ မြန်မာ့ ယဉ်ကျေးမှု နတ် ကိုး ကွယ်မှု စစ်စစ်မှာ ၃၇ မင်းနတ်သာရှိသည်ဟု လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။
ကိုလင်းဦး ( စိတ်ပညာ ) ရေးသားထား သည့် သာသနာတော် ကို ဂုဏ်တင်နေတာလား၊ ဂုဏ်ချနေတာလား။ ပိုစ့် လေး အား ဖတ်မိပြီး ကျမ ဒီပိုစ့်ကို ရေးလိုက်ပါသည်----။
ကမ္ဘာ့သမိုင်း နှင့်ပတ်သက်ပြီး ပိုစ့်လေးတော့ တင်အုံးမည် ဟု စိတ်ကူးထားသည့်အတိုင်း ရေး မည် ကြံတော့--ရှေးပဝေသဏီ က ကမ္ဘာ့ သမိုင်း များ ထက် ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် ပြီး စ စစ်အေးခေတ် ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံရေး အခြေ အ နေများ နှင့် ဆက်နွယ် သည့် ယနေ့ နိုင်ငံ တကာ စီးပွား ရေး အခြေ အနေ များအား ဦးစွာ ရေး သား ချင် စိတ် များပေါ်ပေါက် လာခဲ့ပါသည်။
ဂျီ (၈) ဟု ခေါ် သည့် စက်မှု နိုင်ငံကြီး ရှစ် နိုင်ငံ အကြောင်း အား ရေးသွားမည်ဟု လည်း စိတ်ကူး ထား သဖြင့် အာစီယံ နိုင်ငံများ နှင့် နိုင်ငံရေး ဆက်နွယ် ပတ်သက်ခဲ့သည့် အမေရိ ကန်နိုင်ငံ ၏ စစ်အေး ခေတ် နိုင်ငံရေး အ ခြေအနေ နှင့် ယနေ့ အမေရိကန် ၏ စီးပွားရေး အခြေ အနေ ယေဘူယျ အား ပထမ ဦးစွာ ရေး သား လိုက် ပါ သည်။
ဒုတိယ ကမ္ဘာ စစ် အပြီး စစ်အေး တိုက်ပွဲ ကာလ တွင် အမေရိကန် က ဆိုဗီယက် ရုရှား အင်အားကြီး နိုင်ငံအား စိုးရိမ် စိတ်ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံ မှ လက်ျာ အစွန်း ရောက် စစ်ဝါဒီ မြေအောက် ရာဇာ များအား အသုံးချပြီး နိုင်ငံ ရေး အ ရ ဂျပန် နိုင်ငံ အား ကျောထောက် နောက်ခံ ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန် ဈေးကွက်ကြီး အား ရက်ရောစွာဖွင့်ပေး ခဲ့ ခြင်းဖြင့်ငှင်း ကိုးရီးယား စစ်ပွဲ အားဖြင့်ငှင်း ဂျပန်နိုင်ငံ အား တဟုန်ထိုး တိုးတက် စေခဲ့သည်။ အမေရိကန် ၏ ပုံ အော ထောက် ပံ့ ခြင်း ခံရသည့် အာရှ အာဏာရှင် နိုင်ငံ များ သည်လည်း အ ရည် အ သွေး ကောင်းလာပြီး ဈေး ပေါသည့် ဂျပန်လုပ် ပစ္စည်းများ၏ အဓိက ဈေး ကွက် များဖြစ် လာကြသည်။
အမေရိကန်နှင့် အနောက် အုပ်စု ၏ မျက်နှာသာ ပေးခြင်းကြောင့် အာရှ အာ ဏာ ရှင် နိုင်ငံ များ သည် အာရှ၏ ကျား များ နဂါး များဖြစ်လာကြပြီး ရွှေထီး ဆောင်းခဲ့ကြပါသည်။ ယနေ့ ကာ လ တွင် အာဏာရှင်နိုင်ငံများ မှ ပြည် သူလူထုများ သည် ဒီမိုကရေစီရေး ရင့်ကျက်လာခြင်း အခြေခံ လူတန်း စားများ ၏ ဒီမိုကရေစီ မျက်နှာ စာ ကျယ်ပြန့် လာခြင်းတို့ကြောင့် ယနေ့ --အမေရိကန်နှင့် အနောက် အုပ်စုတို့သည် မိမိတို့ အားပေး အား မြှောက် ပြု ခဲ့ သည့် အာ ဏာ ရှင် နိုင်ငံများ၏ ဒီမိုကရေစီရေး ကို မျက်ကွယ်ပြု လို့ မရတော့---။
ယနေ့ အမေရိကန်၏ စီးပွားရေး အခြေအနေ အား ယေဘူယျ ကြည့်လျှင် အမေရိကန် နိုင်ငံတွင် လူသန်းပေါင်း ၅၀ ကျော်သည် ဆင်းရဲ မွဲတေ နေသည် ဟု လေ့လာသူများ က ဆိုပါသည်။ အိုးအိမ်မဲ့ ပြည်သူများ ၏ ပြဿနာ ကို အမေရိကန် လူမှုဗေဒ ပညာရှင်များနှင့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ ကျောင်းသား သုတေသီများ က အသေ အ ချာ လေ့လာ ဆန်း စစ်နေ ကြ ပါသည်။
သုံး မကုန် ဖြုံး မကုန် နိုင်အောင် ချမ်းသာကြွယ်ဝသူ ကမ္ဘာ့သန်းကြွယ် သူဌေးကြီးများနှင့် အလွန်ဆင်းရဲမွဲတေပြီး အဟာရချို့တဲ့ ငတ်မွတ်သေဆုံးရသည် အထိ လူသား ချင်း တူ သော် လည်း မျှတ မှု မရှိသည့် အလွန် ကွာဟ နေသည့် အခြေအနေများအား တွေ့နေရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ က ထုတ်ပြန်သည့် ကြေညာချက် တခုတွင် ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး သန်းကြွယ် သူဌေး သုံးယောက်၏ ချမ်းသာကြွယ်ဝ ခြင်းသည် ဆင်းရဲသည့် နိုင်ငံ လေးဆယ့် ရှစ် နိုင်ငံ၏ ပြည်တွင်း အသား တင် ထုတ်လုပ်မှု တန် ဘိုးထက် ပိုပြီး များပြားနေသည်ဟု ဖေါ်ပြထား ပါသည်။ ထို့ အပြင် ကမ္ဘာ့လူဦးရေ နှစ် ဒဿမ ငါး ဗီလီယံ သည် တရက် ဝင်ငွေ မလောက်မငှ နှင့် အသက်ရှင် ရပ်တည်နေရပြီး အဟာရ ချို့တဲ့မှု နှင့် သောက်ရေသန့် မရရှိ သူ များ ဖြစ်ကြသည်ဟု ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှု အစီအစဉ်က ဖေါ်ပြထားသည်။
အမေရိကန်စာရေးဆရာ သတင်းစာဆရာတဦးဖြစ်သူ ဒေးဗစ်ကေရှစ် ပလာသည် ( The working poor - Invisible in America ) ဟူသည့် ငှင်း စာအုပ်တွင် အမေရိကန်နိုင်ငံမှ လူအချို့ ဆင်းရဲတွင်း နက်ပုံ ကို ဖေါ်ပြ ထား ပုံမှာ ပျက်စီး ဟောင်းနွမ်း နေသော လူနေ တိုက်ခန်း တခု မှ ကလေးငယ် တဦးသည် ရင်ကြပ်ရောဂါ ကို ဆိုးဆိုး ဝါးဝါး ခံစားနေရသည်။ ဆေးရုံ သို့ အရေးပေါ် ဆေးကုသ ရန်သွားရသည် မိခင်က တရိပ် ရိပ် တက် နေ သည့်ဆေးဘိုးဝါးခ ကို မပေးနိုင်ပါ--။ ထို့ကြောင့် မိခင်သည် နာမည်ပျက် စာရင်းဝင်သွားသည်--အကြွေး ဝယ် ထား သည့် မော်တော်ကား အတွက် အတိုးနှုန်း ကို တက်စေသည်။
ကား ဟောင်း ကို ဝယ်စီးရသည် --ထို မိခင်သည် ကားဟောင်း စီးပြီး ကား မကြာခဏ ပျက်သဖြင့် အလုပ်ခွင် သို့ မကြာခဏ နောက်ကျမှ ရောက်လာသည်--ထို့ကြောင့် ရာထူးတိုးရန်--လစာ ကောင်း ရရန် အခွင့်အလမ်း နည်း ပါးသွားသည်---ထို့ကြောင့် ပျက်စီးဟောင်းနွမ်းနေသည့် လူနေ တိုက်ခန်းထဲမှ ရုန်းမထွက် နိုင်တော့ပေ---
ထို ကလေးငယ်နှင့် မိခင်သည်--ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး နိုင်ငံမှာ နေလျက် သူတို့ အပေါ် ဘေး ဆိုး ကပ် ဆိုး အုပ် စိုးနေသလို အမြဲထိတ်လန့် ကြောက်ရွံ့ နေရရှာသည်ဟု ရေး သား ထား ပါ သည်။
Posted by Sanghaalliance at 1:37 AM0comments
နာဂစ် မုန်တိုင်းအပြီး Logistic ဘာသာရပ်ဖြင့် အသက် မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုရန် စိတ်ဝင်စားသော လုပ်သက် သုံးနှစ် အထက်ရှိသူများက မြန်မာ - စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံတွင်
နိုင်ငံတွင်း နာဂစ်မုန်တိုင်းအပြီး Logistics ဘာသာရပ်၏အခန်းကဏ္ဍသည် အဆင့်မြင့်အသက်မွေးဝမ်း"ကျောင်းပြုလိုသူများအတွက် လစာမြင့်မားစာရပ်တည်မှုရှိနေရာ လုပ်သက်သုံးနှစ်အထက်ရှိသူ စိတ်ဝင်စားသူများ"ကို မြန်မာစာနှင့် စင်ကာပူနှစ်နိုင်ငံတွင် ငါးလတာသင်ကြားပို့ချမည့် သင်တန်းစတင် မြန်မာ-စင်ကာပူ နှစ်နိုင်ငံတွင်"ငါးလတာသင်ကြားပို့ချမည့်သင်တန်း စတင်နေပြီဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ အခြေစိုက် STI ကျောင်း၏ သတင်းပြန်"ချက်တစ်ရပ်အရသိရသည်။ Executive Diploma Logistic and supply Chain Managementကိုလုပ်ငန်းခွင်တွင်း"လုပ်သက်သုံးနှစ်အထက်ရှိသည့်မည်သူမဆို တက်ရောက်နိုင်ရာ စင်ကာပူနိုင်ငံ SIMM ကျောင်းမှ ပါမောက္ခများက"ရန်ကုန်မြို့တွင်တစ်လလျှင် နှစ်ပတ်နှုန်းဖြင့် ငါးလတိတိသင်ကြားသွားမည်ဖြစ်ပြီးစင်ကာပူနိုင်ငံတွင်တစ်ပတ်တိတိ"လေ့လာသင်ယူခြင်း အစီအစဉ်ပါဝင်သွားမည်ဟုလည်းသိရသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံတွင်း တစ်ပတ်တာသွားရောက်ရ"မည့် အစီအစဉ်နှင့် ပက်သက်၍ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများတွင်း Logistics ဆိုင်ရာထိပ်တန်းဝင်ငွေရရှိနေ သည့်"နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေသည့် စင်ကာပူနိုင်ငံရှိ Logistics Industry များသို့သင်တန်းသားများမှ လေ့လာသွားရမည်
ဖြစ်ကြောင်းကို STI၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရှိရသည်။ Logistics ဘာသာရပ်တွင် ကုန်ပစ္စည်းများ အချိန်မီ"ရောက်ရှိစေရေးနည်းပညာရပ်များ၊ လက်ဝယ်ရှိကုန်ပစ္စည်းများလျှော့ချနိုင်ပုံနှင့် ငွေကြေးအရင်းအနှီးလျှော့ချနိုင်ပုံ၊"ဘေးအန္တရာယ်ကြောင့် ဆုံးရှုံးမှုတို့မှ ကာကွယ်နိုင်ပုံစသည့်နည်းပညာရပ်ဆိုင်ရာများပါဝင်ကြောင်းသိရသည်။ စိတ်"ပါဝင်စားသူများ ကိုနိုဝင်ဘာလတွင် စတင် လက်ခံမည်ဖြစ်ပြီး သင်တန်းတက် ရောက်ပြီးသူများအနေဖြင့် Curtin"University မှ MBA ဘွဲ့ကိုဆက်လက်သင်ယူ သွားနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် သင်တန်းကျောင်းအား STI တည်ရှိရာ
မြန်မာ အင်ဖိုတက်ခ်ျနှင့်ပန်းဘဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ရွှေဘုံသာလမ်း(အထက်)တွင်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၈ခုနှစ်"အောက်တိုဘာလ ၂၄ရက်နေ့ထုတ် Bi Weekly Eleven ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။"
Posted by Sanghaalliance at 1:26 AM0comments
ရန်ကုန်တိုင်းမရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ဓာတ်ဆီဖြည့်စဉ်မီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ရပ်"အောက်တိုဘာလ ၁၄ရက်နေ့နံနက်၉နာရီအချိန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်တိုင်းမီးသတ်ဦးစီးဌာန၏တရားဝင်"ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရသည်။ အဆိုပါယာဉ်မီးလောင်မှုသည် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်(၅)ရပ်ကွက်၊ မောရ၀တီ လမ်း၊ ခြံ"အမှတ်(၁၃၃)တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး မော်တော်ယာဉ်ဆီဖြည့်နေစဉ် မီးခြစ်ခြစ်လိုက်ရာမှ လောင်ကျွမ်းမှု စတင်ခဲ့"ကြောင်း၊ မော်တော်ယာဉ် မီးလောင်းကျွမ်းမှုကြောင့် တာယာများ၊ မီးသီးလေးလုံး၊ ရှေ့မှန်၊ နောက်မှန်များ၊ ကူရှင်"များနှင့်ယာဉ်တစ်စီးလုံးနီးပါးလောင်ကျွမ်းခဲ့သည့်အပြင် မော်တော် ယာဉ်ထားရာ အဆောက်အအုံ၏ ထုတ်တန်း၊"တံခါးနှင့်ခေါင်မိုးများမီးလောင်ခဲ့ကြောင်း၊ လောင်ကျွမ်းခဲ့သည့် ယာဉ်အမျိုးအစားမှာ Sunny Pick-up ဖြစ်ကြောင်း၊"မီးလောင်ကျွမ်းမှုတစ်ခုလုံး၏ ဆုံးရှုံးမှုတန်ဖိုးကို ကျပ်သုံးသိန်းသတ်မှတ်ပြီးအဆောက်အအုံဆုံးရှုံးမှုကိုသုံးသောင်း"ကျော်သတ်မှတ်ထားကြောင်း အဆိုပါတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် အဆိုပါဌာနမှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦး၏ ပြောကြား"ချက်အရသိရသည်။ မော်တော်ယာဉ်မီးလောင်ကျွမ်းရာ နေရာသို့မီးသတ်ယာဉ်(၁၄)စီးနှင့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်(၁၂၁)
ဦးမီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ကြောင်း ပွင့်လင်းရာသီရောက်လာခြင်းကြောင့် မီးဘေး အန္တရာယ်ကို ပိုမိုဂရုစိုက်ကြရန် လိုအပ်"ကြောင်း မီးလောင်မှုသည်အချိန်အခါ၊ နေရာဒေသမရွေးဖြစ်ပွားတတ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် လူတိုင်းက တစ်ဦးချင်း"အသိဖြင့် ဂရုစိုက်သင့် ကြောင်းတိုင်းမီးသတ်ဦးစီးဌာနမှအရာရှိတစ်ဦးကပြောကြားကြောင်း၂၀၀၈ခုနှစ်အောက်တို"ဘာလ ၂၇ရက်နေ့The Voice ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by Sanghaalliance at 1:25 AM0comments
ဗုဒ္ဓ စာပေကို အင်္ဂလိပ် ဘာသာဖြင့် အခမဲ့ လေ့လာ သင်ယူနိုင်
ဗုဒ္ဓစာပေကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် လေ့လာလိုသူများအတွက် အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း Brightful"Horizon ကုမ္ပဏီက စာသင်ဝိုင်းတစ်ခုစီစဉ်ပေးပြီး သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိကြောင်းအဆိုပါကုမ္ပဏီ၏အုပ်ချုပ်မှုအကြီး"အကဲ ဦးဇော်မိုးအောင်ကပြောသည်။ အဆိုပါဗုဒ္ဓစာပေကို လေ့လာရန်စိတ်ပါဝင်စားသူများသည် အင်္ဂလိပ်စာအခြေ"ခံရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ဗုဒ္ဓစာပေကိုလေ့လာခြင်းဖြင့် ပါဠိဖတ်တတ်လာပြီးအတွေးအမြင်လည်းပိုမိုကောင်းမွန်လာ"မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စတင်ဖွင့်လှစ်ချိန် စက်တင်ဘာလက ၅၀ ဦးခန့်လာရောက် လျှောက်ထားကြောင်း၊ စာဖတ်ဝိုင်း"တစ်ဝိုင်းကို လူ ၂၀ဦးသာ ကန့်သတ်ထားသဖြင့် ပထမလတွင် လူ ၃၇ဦးကိုရွေးချယ် စိစစ်ရကြောင်း၊ ဆက်လက်၍"တက်ရောက်လိုသူများရှိက ညနေပိုင်းအတန်းနှင့် နံနက်ပိုင်းစာဖတ်ဝိုင်းကိုအဆင်ပြေစွာတက်ရောက်နိုင်ရန်ညှိနှိုင်း"သင်ကြားပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း၎င်းကဆိုသည်။ ယင်းစာဖတ်ဝိုင်းမှာ အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီမှ နေ့"လယ်၁၂နာရီအထိ ပုံမှန်ရှိပြီးနားလည်တတ်ကျွမ်းသည့် ဆရာများက ဓမ္မဒါနအဖြစ်သင်ကြားပို့ချပေးကြောင်း စိတ်"ဝင်စားတက်ရောက်လိုပါက တယ်လီဖုန်းနံပါတ် ၆၆၅၂၃၅ သို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ကြောင်း၎င်းကထပ်မံပြောကြား"ကြောင်း ၂၀၀၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၂၇ရက်နေ့ထုတ် The Voice ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။"
ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေး အခြေအနေ ငါးနှစ် အတွင်း ပြန်ကောင်း လာမည်
စင်္ကာပူနိုင်ငံ Human Capital Summit စည်းဝေးပွဲတွင် နိုင်ငံ၏ ၀ါရင့်ခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်သူ လီကွမ်ယူ
က ယနေ့ ဈေးကွက်ကသောင်းကနင်းဖြစ်မှု၏ အတိမ်အနက်နှင့် မည်မျှကြာကြာဒုက္ခခံရမည်ကိုခန့်မှန်း ပြောဆိုရန်
မလွယ်ကူကြောင်း၊ အာရှဒေသသည် ကမ္ဘာ့အခြား ဒေသများထက် အခြေအနေ ကောင်းမွန်ကြောင်း၊ တရုတ်နှင့်
အိန္ဒိယ၏ တိုးတက်မှုအခြေအနေကြောင့် အာရှအတွက် သက်သာ ခွင့်ရကြောင်း၊ အခြေအနေအရ အလုပ်လက်မဲ့
ဘဏ်လုပ်ငန်း၏ ချွတ်ယွင်းချက်များကို ပြင်ဆင်ပြီးသွားလျှင် ကမ္ဘာ့ စီးပွားရေးသည် သုံးနှစ်မှ ငါး နှစ်အတွင်း ပြန်
လည် တည်ငြိမ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုသည်။ (အေအက်ဖ်ပီ)
Posted by Sanghaalliance at 1:18 AM0comments
အော်စကာဆုရှင် ဂျက်နီဖာ ဟဒ်ဆန်၏ မိခင် နှင့် အစ်ကို ဖြစ်သူ အသတ်ခံရ
အော်စကာဆုရှင် ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဂျက်နီဇာဟဒ်ဆန်၏ မိခင်နှင့် အစ်ကိုဖြစ်သူတို့သည် ၎င်းတို့နေထိုင်
ရာ ချီကာဂိုမြို့နေအိမ်၌ လုပ်ကြံ သတ်ဖြတ်ခံရမှုကြောင့် သေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သူမ၏ မိခင် Darnell
Donnerson (၅၇ နှစ်) နှင့် အစ်ကိုဖြစ်သူ Jason Hudson (၂၉ နှစ်) တို့၏ ရုပ်အလောင်းများကိုမိခင်ဖြစ်သူနေထိုင်
ရာ Englewood အရပ်ရှိ နေအိမ်၌ သောကြာနေ့ နေံလည် ၃း၀၀နာရီအချိန်ခန့်တွင်သေဆုံးလျက်တွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်
ကြောင်း သတင်းများကဆိုသည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်သည် အိမ်တွင်းရေးပြဿနာကို အခြေခံ၍ ပေါ်ပေါက်လာသော လူ
သတ်မှုဖြစ်ဟန်ရှိသည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ယူဆထားသည်။ ရုပ်ရှင်မင်းသမီး ဂျက်နီဇာဟဒ်ဆန် (26 နှစ်)သည်အမေရိ
ကန်စံပြမယ်အဖြစ် နိုင်ငံတ၀ှမ်းလျှမ်းလျှမ်းတောက် ကျော်ကြားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး 'Dreamgirls'ဇာတ်ကားဖြင့်အော်
စကာထူးချွန်ဆု ရရှိထားသူဖြစ်သည်။ (အေအက်ဖ်ပီ)
(၂၅၊ ၁၀၊ ၂၀၀၈) ရက်၊ နံနက် (၉း၃၀) နာရီ။
Posted by Sanghaalliance at 1:15 AM0comments
Posted by Sanghaalliance at 1:12 AM0comments
သူငယ်ချင်းက မကြာခဏ ပြောတယ်
နှလုံးသွင်းတတ်ဖို့ လိုသည် တဲ့ ။
"ယောနိသော မနသိကာရ" ကို
နှလုံးသွင်းနိုင် မှာတဲ့တုန်း ။
ဖေါ့ဖယောင်းလို ပျော့ ပျောင်းပေမယ့်
သေနတ်ကိုင်ဆွဲ တရားသောစစ်ကို ဆင်နွှဲနေတာမြင်နေရတော့
"မင်းတို့ ငါတို့ ခေတ်မှာ
စစ်အာဏာရှင်စနစ် အဆုံးသတ်ဘို့ ကြိုစား"
ခေတ်ဆိုး စနစ်ဆိုးရဲ့ သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရ
ရေမျောကမ်းတင် ဖြစ်အင်တွေ မြင်တွေ့ နေရတော့
မင်း မကြာခဏ ပြောပြနေတဲ့
ငါ နှလုံးသွင်းလို့ ရမှာပါ ။
မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဟာ အချိန်ကြာနိုင်ပြီး စစ်အစိုးရက အရပ်သား အစိုးရတရပ် အုပ်ချုပ်နိုင်အောင် ပြင်ဆင်တာမျိုး မရှိတဲ့အကြောင်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ တိုမာ့တ်စ် အိုဟေး ကင်တာနား (Thomas Ojea Quintana) က ဝေဖန် ပြောဆိုပါတယ်။ တချိန်တည်းမှာ စစ်အစိုးရ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အမျိုးသား ညီလာခံဟာ အတုအယောင် ဖြစ်တယ်လို့ ဝေဖန်လိုက်ပြီး စစ်အစိုးရအနေနဲ့ သူ အဆိုပြုထားတဲ့ နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အချက်လေးချက်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ထပ်မံ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
"မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်မှာ အရပ်သားအစိုးရတရပ် ပေါ်လာရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အချိန်ယူရအုံးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သေချာတဲ့အချက် သိသိသာသာ မြင်ရတဲ့အချက် ကတော့ စစ်အစိုးရက အရပ်သားအစိုးရ အတွက် ပြင်ဆင်တာမျိုး မရှိပါဘူး။ စစ်အတွက်ပဲ ပြင်ဆင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အချိန်ကြာမယ်လို့ ကျနော်ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။"
"ကျနော့် အစီရင်ခံစာမှာ ကျနော် ပြောထားပါတယ်။ စစ်အစိုးရ ကျင်းပတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံ ဟာ အတုအယောင် အမျိုးသားညီလာခံ ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး၊ ဒီကိစ္စက ရှင်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်းမှာ ရောက်ခဲ့တဲ့ အတွက်လည်း ဒီကိစ္စကို ကျနော် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကျနော် အဆိုပြုထားတဲ့ အချက်လေးချက်က မြန်မာစစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီမိုကရေစီ တည်ဆောက်ရေး ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးပဲ လုပ်လုပ် ဒီအချက်တွေကို အကောင်အထည် မဖော်ဘူးဆိုရင် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုမှာ မဟုတ်ပါဘူး။"
"ကျနော့် ရှုမြင်ချက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟာ တဖက်သတ် စစ်အစိုးရဘက်က သူ့သဘောနဲ့သူ ချုပ်နှောင် ထားတာကို ခံထားရတာပါ။ မျှမျှတတ တရားစီရင်တာကို မခံရဘူးလို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။ အခု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရှေ့နေက အယူခံ ၀င်ထားတယ်လို့ ကျနော် သိပါတယ်။ စစ်အစိုးရအနေနဲ့ ဒီကိစ္စကို အရေးတယူ ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီး မျှမျှတတ စဉ်းစားမယ်၊ ချက်ခြင်း လွှတ်ပေးလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။"
ကာဝါဆာကီ ကီဆင် ကိုင်ရှာ (Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.) ဂျပန်သင်္ဘောလိုင်း၏ ဒေသတွင်း လက်အောက်ခံ သင်္ဘောလိုင်း ဖြစ်သည့် စင်္ကာပူမှ ('K' Line Singapore Pte Ltd.) သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ကွန်တိန်နာများ တင်ပို့နေသည့် လုပ်ငန်းကို ယာယီ ရပ်ဆိုင်းထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပြီး၊ လာမည့်လတွင် လုံးဝ ရပ်ဆိုင်းရန် စီစဉ်ထားသည်။
မန္တလေးတိုင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် စည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင် ဒေါ်ဝင်းမြမြအား မန္တလေး အိုးဘိုထောင်တွင်း တရားရုံးက ယနေ့တွင် ထောင်ဒဏ် ၁၂ နှစ် ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်လိုက်သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကြိုတင်ပြင်ဆင်သည့် အနေဖြင့် ပလောင်ဒေသတွင် အာဏာပိုင်များက ယခုလအတွင်း နိုင်ငံရေး စိစစ်ရေးကဒ်များ ထုတ်ပေးနေကြောင်း ပြည်ပအခြေစိုက် ပလောင်အဖွဲ့အစည်း တခုက ပြောသည်။
Posted by Sanghaalliance at 10:20 PM 1 comments
စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှု ပိုလုပ်လာခြင်း၊ မြန်မာစစ်တပ်က ရွာသားများအား အတင်းအကျပ် ပြောင်းရွှေ့စေခြင်း အပါအဝင် စနစ်တကျ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများကြောင့် ပြီးခဲ့သောနှစ်အတွင်း မိမိတို့ အိုးအိမ်များမှ စွန့်ခွါရသည့် အရပ်သား အနည်းဆုံး ၆၆ဝဝဝ ရှိသည်ဟု ရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များကို ကူညီစောင့်ရှောက်နေသော အဖွဲ့တခုက ပြောဆိုလိုက်သည်။
မဇ္ဇိမသတင်းဌာနမှ စာရေးဆရာမောင်သစ်ဦး ရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးလေးကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
ဈေးဆိုင်တန်း အားလုံးလိုလို ကက်ဆက်သံ၊ ဓာတ်စက်သံများ အပြိုင်အဆိုင် ဖွင့်ထားကြသဖြင့် ပွဲခင်းတခုလုံး ဆူညံလျက်ရှိ၏။ ခနော်ခနဲ့ တန်းလျားပေါ်တွင် ထိုင်ရသည်မှာ လဲမကျအောင်ထိန်းပြီး ထိုင်ရ၏။ သည်ကြားထဲ လယ်ကွက်ထဲတွင် ကုလားဖျဉ်းထိုး ဆိုင်ဖွင့်ထားသည်မို့ မြေကြီးခဲ၊ ရိုးပြတ်ငုတ်တိုနှင့် ပတ်ကြားအက်များကြောင့် တန်းလျားမှာ တလှုပ်လှုပ်ဖြစ်နေ၏။ ကိုယ်က ငြိမ်အောင် ထိုင် ပေသည့်ဘေးချင်း ယှဉ်ထိုင်ပြီး မုန့်ဟင်းခါး စားနေသူနှစ်ယောက်က အငြိမ်မနေကြ။ ငြုပ်သီးထထည့်၊ ဟင်းရည်ထတောင်းနှင့် ထိုင်လိုက်ထလိုက် လုပ်သည့်အခါ ကျနော့်လက်ထဲက ဇွန်းမှာ ပါးစပ်ပေါက်ဝတွင် ယိမ်းထိုးလျက်ရှိ၏။